Shwe Canaan TV: October 2020
မေးခွန်နံပါတ် ၂၄ ။
၂၄။ သတ္တဝါတို့ သည် ဘယ်တရား၏သဘောကို ခံယူနေကြပါသနည်း။ အို၊ နာ၊ သေနဲ့ ခန္ဓာ ဒုက္ခအကြောင်း သတ္တဝါလောက၏ ဘုံဘဝတို့ကို ဆင်းရဲကြောင်း အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံ) စက်ဝိုင်းကို ဘယ်သူဟောကြားခဲ့ပါသနည်း။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂၄) အဖြေ။
မေးခွန်းတွင် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်) စက်ဝိုင်းကို ဘယ်သူဟောကြားခဲ့ပါသနည်း။ အဖြေက၊ အနိစ္စဘုရား၊ ဒုက္ခဘုရား၊ အနတ္တဘုရားက (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်) စက်ဝိုင်းကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
မောင်နော၊ မောင်ပြား၊ မောင်သာလှတို့သည် ဘာသာပြောင်း၍ မင်္ဂလာခံယူသည်ကို ဆရာယုဒသန် အားပါဋိဘာ သာသင်းပေးသော ပရမက်ဆရာ၊ပဋိကတ်တတ်ဦးရွှေငုံသည် တွေ့ရသောအခါ ဤသူတို့သည် သာမန်မျှဖြစ်ကြသော်လည်း ခုသူတို့ပြောင်းရသောဘာသာအတွက် အသက်နှင့်ပင် လဲရသောသူများဖြစ်၏။ ငါလဲ ဆရာယုဒသန်နေ့တိုင်းဆွေးနွေး၊ နေ့တိုင်းစာသင်ပေးနေသဖြင့် ဆရာပြောသမျှစကား များသည်ဟုတ်လှမှန်လှပေ၏။ ဆရာယုဒသန်ရေးသောရွှေချိန်ခွင်စာ ကလေးမှာလဲ ငါသင်ပေးသောပိဋကတ်အတိုင်းပင်ဖြစ်ချေသည်။ ဘုရားနှင့် ဓမ္မတာ၊ ဘုရားနှင့်ကမ္ဘာ၊ ဘုရားနှင့်လူသတ္တဝါ၊ ဤသည်များကို စဉ်းစားသော် ဘုရားကားအကြောင်း၊ ဓမ္မတာ၊ ကမ္ဘာ၊ လူသတ္တဝါက အကျိုးတရား၊ အကြောင်းရှိမှ အကျိုးတရားရှိသည်။ ငါတို့၏အကြောင်းအကျိုးဖော်ပြသော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတွင်လည်း အဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံ၍ သင်္ခါရဖြစ်ရသည်။ ဤအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကား အဘယ်ကစ၍ အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပေါ်လာရသလဲဆို ပြန်သော်၊ အာသဝသမာဒယော၊ အဝိဇ္ဇာသမုဒယော၊ အာသဝသမုဒယော၊ အာသဝေါတရားလေးပါးဖြစ်ခြင်းကြောင်း အဝိဇ္ဇာသမုဒယော၊ အယီဇ္ဇာဖြစ်ပေးလာရခြင်းအကြောင်းသည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အဝိဇ္ဇာ၏အကြောင်းရင်းကား အာသဝဟုသေသေချာချာချမှတ်အပ်၏။ အဲသည်တော့ကား အဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းရင်းထားရမှာလဲခက်၊ အာသဝကအကြောင်းထားပြန်ရင်လည်းတဏှာပစ္စယာ၊ ဥပါဒနဟု လာပြန်သည်။ ဥပါဒါန်လေးပါးမှာလည်း အာသဝလေးပါးနှင့် သညာသာကွဲ၍ တရားကိုယ်မကွဲပြန်တော့ ပြန်၍ရှူတ်ပြန်သည်။ သို့အတွက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါနတရားလည်းခက်၍ မသိကစ၊ မရှိမှာဆုံး၊ အဝိဇ္ဇာမှစ၍၊ ဥမယာသမှာဆုံးသောတရားကြီးပါတကား၊ သြ-ခက်စွ။ ခက်စွဟု တယောက်တည်းညည်းညူလျက်ရှိ၏။
ေရးသားတင္ျပသူ Truth on October 07, 2020 No comments:
ထာဝရဘုရား၏ ရုပ်ပုံလွှာတွင် ဆံပင်မွှေးညှင်းသည် ဖြူဖွေးသောနှင်းပွင့်နှင့်တူ၏။ မျက်လုံး(၇)လုံးပါရှိ၏။ ဦးချို(၇) ချောင်းရှိ၏ ။ ပါးစပ်တွင် အသွားနှစ်ဖက်ပါသောဓားရှည် တစ်ချောင်းပါပြီး၊ ခြေထောက်တော်နှင့်လက်တော်တို့တွင် မီးရဲရဲ ဖုတ်ထားသောကြေးဝါရောင်ရှိသည်။ ကျမ်းစာတို့တွင်အတိအကျဖော်ပြထားပါလျက် အဘယ်ကြောင့်တရားဟောရာတွင် ထည့်မပြောဘဲ၊ ဝိညာဉ်တော်ဟူ၍ဖုံးကွယ်ထားသည်ကိုရှင်းပြပါ။ ဤသို့သော ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံတို့ဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ်ဟူ၍ ဘယ်လိုခံစားဆက်စပ်၊ ကြည်နူးစွာကြည်ညိုပါသနည်း။
ဤမေးခွန်းတွင်၊ “ထာဝရဘုရား၏ ရုပ်ပုံလွှာ” ဟူ၍ ဖော်ပြထားရာ၊ “ကျမ်းစာတို့တွင် အတိအကျဖော်ပြထားပါ လျက်” ဟုဆိုထားပါသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းအဆိုအမိန့်သည် မည်သည့်ကျမ်းအမည်၊ အခန်းကြီး၊ ငယ်၊ မည်၍မည်မျှစသဖြင့် ကျမ်းကိုးကားချက်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။
ယေရှူက၊ “ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်တော်ဖြစ်မူ၏။ ဘုရားသသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နံဝိညာဉ် နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ယော၊ ၄း၂၄ ။ ၁တိ၊ ၁း၁၇)။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၂ ။
၂၂။ သိပ္ပံသပ်မှု၏တိုးတက်တွေ့ရှိချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းထာဝရဘုရား၏ဖန်ဆင်းမူဝါဒတွေကို ငြင်းဆန်သကဲ့သို့သက် ရောက်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် သိပ္ပံပညာက မှားသည်ဟုပြောမလား၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒမှားသည်ဟု ပြောမလား၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိ ရှိငြင်းချက်ထုတ်ပြပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂၂) အဖြေ။
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် မည်သည့်ကျမ်း၏ အဆိုအမိန့်သည် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူ၊ ကွဲပြားခြားနား လျက်ရှိကြောင်းကို ကျမ်းအမည်၊ အခန်းကြီး၊ ငယ်၊ မည်၍မည်မျှဟူ၍ ဖော်ပြထားမှသာလျှင် ၎င်းမေးခွန်းနှင့်ဆိုင်ရာအချက် အလက်များကို စိစစ်ပြီး ဆီလျော်သင့်မြတ်နိုင်သည့် အဖြေကိုထုတ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းအဆို အမိန့်များနှင့် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကို နှစ်ဘက်နှစ် လမ်းဖော်ပြထားမှသာလျှင် ကျမ်းလေ့လာဆည်းပူးသူများအတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာတင်ပြပေအံ့။ ပိဋကတ်ကျမ်းက၊ “ထိုဘုရားလောင်းယုန်မင်း၊ မျောက်၊ မြေခွေး၊ ဖျံ သတ္တဝါသုံးဦးနှင့်တကွ အလှူပေးမည်နေစဉ်၊ ပုဏ္ဏားအသွင်ဖြင့် သိကြားမင်းအလှူခံလာသော်၊ ယုန်မင်းမီးဖိုသို့ဆင်း၍ ကိုယ်ကိုစွန့်လှူသည်။ သိကြားမင်းအာနုဘော်ကြောင့် မီးမပူ၊ သိကြားမင်းသည် ကမ္ဘာပတ်လုံးကျေးဇူးထင်ရှားစေဟု တောင်တစ်ခု အဆီညှစ်၍ တောင်ဆီဖြင့်လတွင်ယုန်ရုပ်ရေးပြသည်ကို စတုက္ကနိပါတ်သသပဏ္ဍိတ ဇာတ်တွင်ဆို၏။
(ငါးရာ့ငါးဆယ်သိမှတ်ဘွယ်ရာ၊ နှာ ၁၉၀၊ ဦး အေးချိုမဟာ ဝိဇ္ဇာ)
သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအဆိုအမိန့်ကို တင်ပြပေအံ့။ သမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ မြင်ရသောအမည်းရောင်ပုံရိပ်များတို့သည် ယုန်ရုပ်ကိုတောင်ဆီဖြင့် ပန်းချီရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်ချေ။ လပေါ်မှာရှိသောချောက်ကမ်းပါး၊ ချိုင့်ဝှမ်းများတို့၏မှောင်ရိပ် မည်းများသာဖြစ်သည်ဟု သိပ္ပံပညာဆိုင်တွေ့ရှိချက်များ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။ တစ်ဖန်၊ ဤကမ္ဘာမြေကြီးသည်ဘောလုံး၊ လိမ္မော်သီးများကဲ့သို့ အလုံးမဟုတ်၊ တပါးသော လောကဓာတ်တို့နှင့် ကမ္ဘာမြေပြင်ကြီး၊ ကမ္ဘာရေပြင်ကြီး၊ လေပြင်ကြီးတို့ သည် တဆက်တည်း၊ တခုတည်း၊ တပြင်တည်း တည်ရှိကြကုန်သည်ဟု အမှန်မုချသိအပ်လှ၏။ ဤကမ္ဘာမြေကြီးသည် နေ၊ လ၊ နက္ခတ်တာရာတို့ကဲ့သို့ ကောင်းကင်၌တည်သည်လည်းမဟုတ်၊ လှည့်လည်ရွေ့ရှားသွားလာသည်လည်းမဟုတ်၊ ကမ္ဘာရေပြင်ကြီး အပေါ်၌ အမြဲတည်နေသည်ဟု အမှန်မုချသိအပ်လှ၏။
နေသည်မြင့်မိုရ်တောင်ကြီးကို အစဉ်အမြဲလှည့်လည်၍နေသည်အတွက်ကြောင့် လေးကျွန်းလုံးတို့၌ နေ့အခါ၊ ညဉ့်အခါဟူ၍ ခြားနားချက်ရှိသည်ကျု အမှန်သိအပ်၏။ ညဉ့်မှောင်သည် အဘယ်မှာဖြစ်သနည်းဆိုသော် နေရောင် ကိုကွယ် ကာနိုင်သောမြင့်မိုရ်တောင်ကြီးမှဖြစ်၏။ မြင့်မိုရ်တောင်ရိပ်ကြီးပင်တည်းဟုအမှန်အားဖြင့် သိအပ်၏။ ဤကား နေသည်မြင့်မိုရ်တောင်ကြီးကို အမြဲလှည့်လည်၍နေရာ၌ ပါဋိသက်သေ၊ယုတ္တိသက်သေများပေတည်း။ (သာသနာဝိသောဓနီကျမ်း၊ နှာ၊ ၁၆၁-၁၇၀။ လယ်ဒီဆရာတာ်ဘုရားကြီး)
နေနှင့်ကမ္ဘာမြေကြီးတို့၏ လည်ပတ်ပုံကို မူလတန်းအဆင့်ကစ၍ သိပ္ပံဖတ်စာ၌ သင်ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်သဖြင့် အထူး ဖော်ပြရန် လိုမည်မထင်။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၁ ။
၂၁။ ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းသည်မှာ တစ်ကမ္ဘာဘဲဟု သိရပါသည်။ သို့သော် စကြာဝဠာအနန ္တဟူ၍မရေမတွက်နိုင်သော ဂြိုလ်အမျိုးမျိုး၊ ကမ္ဘာအမျိုးမျိုးရှိနေကြောင်း သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ၌ ဖော်ပြနေကြသည်ကို အဘယ်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း။
အထက်ပါမေးခွန်းနံပါတ်(၂၀) အဖြေထဲမှာ ဖော်ပြထားသော “ကောလောသဲ၊ ၁း၁၆” ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်တည်းဖြင့် ပင် ဤမေးခွန်းနံပါတ်(၂၁) အတွက်အဖြေက၊ လုံလောက်နေပြီဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထပ်လောင်း၍ဖြေကြားရဦးမည်ဆိုလျှင်(ဆာလံ၁၉း၁ )က “မိုဃ်းကောင်းကင်သည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုကြားပြော၍ မိုဃ်းမျက်နှာကျက်သည် လက်တော်နှင့်လုပ် သောအရာများကိုပြသ၏” ။ တစ်ဖန်၊ (ဆာလံ ၃၃း၆) က “ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် မိုဃ်းကောင်းကင်ကို၎င်း၊ နှုတ်တော်အသက်အားဖြင့် မိုဃ်းကောင်းကင်တန်ဆာများကို၎င်း၊ ဖန်ဆင်းတော်မူ၏” ။ တစ်ဖန်၊ “လောကဓာတ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်သာ တည်သည်ကို ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သိကြ၏” (ဟေဗြဲ၊ ၁၁း၃။ ယေ၊ ၁၀း၁၂)။
ဥပမာအားဖြင့်၊ မျက်မမြင်ခုနှစ်ဖော်ဝတ္ထုတွင် မျက်မမြင်များဖြစ်ကြသည့်အလျောက် ဆင်တစ်ကောင်လုံး၏ အ ဆင်းသဏ္ဍာန်ကို ရုပ်လုံး မဖော်နိုင်ကြပေ။ နားရွက်ကိုစမ်းမိသောသူက၊ ဆင်သည်ယပ်တော်နှင့် တူကြောင်း၊ ဤမျက်မမြင် များလည်းအစွယ်ကိုစမ်းမိသူကလှံ၊ ဘေးကိုစမ်းမိသူက နံရံ၊ ဖြေကိုစမ်းမိသူက တိုင်ဟူ၍အသီးသီးစမ်းမိသည့်အတိုင်း ဆင်၏သဏ္ဍာန်ကို တစ်လွဲကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါကျမ်းပိုဒ်များတွင် “မိုဃ်းမျက်နှာကျက်” ၊ “မိုဃ်းကောင်းကင်တန်ဆာများ” ၊ “လောကဓာတ်တို့ သည်” အစရှိသည်ဟုဆိုရာတွင် ခပ်သိမ်းသောစကြာဝဠာနှင့်လည်း အကျွမ်းဝင်လျက်ရှိကြောင်း သိမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်မျက်စိကွယ်သောသူအဖို့ တစ်ကမ္ဘာဘဲဖန်ဆင်းတော်မူသည်ဟုဆိုတတ်၏။
ယေရှူက၊ “ငါသည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏ ။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောက်မိုက်၌မသွားမလာ၊ အသက်၏အလင်းကို ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တာ်မး၏”။ (ယော၊ ၈း၁၂)။
“မယုံကြည်သောသူတို့ကား၊ ဘုရားသခင်၏ပုံဏ္ဍာန်တော်တည်းဟုသော ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေနှင့် ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏ အရောင်သည် အလင်းကိုမပေးစေခြင်းငှာ၊ ဤလောကကိုအစိုးရသောဘုရားသည် သူတို့၏ ဉာဏ်မျက်စိကိုကွယ်စေ၏” (၂ကော၊ ၄း၄)။
ယေရှူက၊ “မျက်စိကား ကိုယ်၏ဆီမီးဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် မျက်စိကြည်လင်လျှင် တကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မည်။ မျက်စိမြှေးရှက်လျှင် တကိုယ်လုံးမိုက်လိမ့်မည်။ သင်၏အလင်းသော်ကား၊ မှောက်မိုက်ဖြစ်လျှင် ထိုအမိုက်သည် အလွန်မိုက်စွတကား” (မ၊ ၆း၂၂-၂၃)။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၀ ။
၂၀။ ဖန်ဆင်းရှင်သည် ဤကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် တစ်ခြားတစ်ခြားသောစကြာဝဠာ၊ ဂြိုလ်အသီးသီး မှဂြိုလ်သားများ၊ ဤကမ္ဘာသို့ရောက်ရှိနေခြင်း၊ ရောက်ရှိလာခြင်းတွေကို သိပ္ပံသုတေသနပြုစာအုပ်များတွင် အထင်အရှား ပင်တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထိုဂြိုလ်သားများကို ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းခဲ့သလား။ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုပါက ကျမ်းအထောက်အ ထားခိုင်လုံစွာဖြင့် ဖြေကြားပေးပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂၀) အဖြေ။
သမ္မာကျမ်းစာ၏ “အကြောင်းအရာအညွှန်း” ထဲမှ “ဂြိုလ်သား” ဟူသော ဝါဟာရအသုံးအနှုံးမျိုးမတွေ့ရပါ။ အကယ်၍ သိပ္ပံပညာရှင်များက၊ “ဂြိုလ်သား” ကို ဖမ်းမိထားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သုတေသနပညာရှင်များလာ ရောက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဟူ၍စိန်ခေါ်လိုက်နိုင်သည့်တိုင်အောင်၊ အဆိုပါဂြိုလ်သားနှင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ဘုရားသခင်၏ “ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ” ကြောင်းကို (ယော၊ ၁း၃) သမ္မာကျမ်းစာက မိန့်ဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။
“ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်ပေါ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောရူပအရာ၊ ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရချင်းတန်းခိုး ဖြစ်စေ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏” (ကော၊ ၁း၁၆)။
“ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကို အသီးအခြားရေးထားလျှင်မြေကြီးမဆံ့နိုင်အောင် ကျမ်းစာများပြားလိမ့်မည်ဟု ထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ (ယော၊ ၂၁း၂၅ ဆုံး)။
မေးခွန်နံပါတ် ၁၈ , ၁၉ ။
၁၈ , ၁၉။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာစားပြီး၊ ဘုရားကျွေးသည်ဟူသောစကားမိမိဘာသာစီးပွားရှာ၍ ပြည့်စုံခြင်းကို ဘုရားပေး သည်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းပြပါ။ သင်မရှာထားပါက အစားအစာရပါမည်လော။ သင်စီးပွားမရှာပါက ပြည့်စုံပါမည်လား။ ထိုသို့ စားရခြင်း၊ ပြည့်စုံရခြင်းအကျိုးတရားတို့တွင် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ရှိပါသလား။ ရှိပါကဖော်ပြပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာစားပြီး တလွဲကျေးဇူးတင်ရာရောက် မနေဘူးလား။ သဘာဝကျအောင်စဉ်းစားဖြေကြားပေးပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁၈) အဖြေ။
ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းမျိုးသည် ရုပ်ဝါဒီတွေကသာ မေးလေ့မေးထရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတွေရဲ့ လက်သုံးစကားလုံးဖြစ်ပါသည်။
“ပါဋိပညာရှင် မစ္စတာရိုင်း(စ်) ဒေးဗစ်၏ ရေးသားချက်ကို ကျွနု်ပ်ဖော်ပြလို၏….။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဘယ်အခါ ကမှရုပ်ဝါဒမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း နောက်ကာလ၌ ဘဝသံသရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းလာကာ ရုပ်ဝါဒအဆင့် အတန်းဆင်ခြင်တုံတရားကိုသာ အခြေပြုသောဝါအဆင့်အတန်းသို့ကျဆင်းလာ၏”။
(ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒ) ပထမပိုင်းဦးအေးမောင်၊ နှာ ၂၃)။
ဘုရားသခင်သည် လူယောက်ျား( အာဒံ) နှင့် လူမိန်းမ(ဧဝ) တို့ကိုဖန်ဆင်းတာ်မူပြီးလျှင် “အချင်းတို့၊ များပြားစွာ မွေးဖွားကြလော့။ မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့” (က၊ ၁း၂၈) ဟုကောင်းကြီးပေးတာ်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေး တော်မူသောအားဖြင့် လူသားမျိုးဆက်သစ်များတို့သည် ဆက်လက်တိုးပွားများပြားလာကာ၊ ယနေ့ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း လူသားမျိုးနွယ်များပြန့်နှံလျက် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆာလံဆရာက “ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုသိမှတ်ကြလော့၊ ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတာ်မူ၍၊ ငါတို့၏အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်လည်း ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြ၏” (ဆာ၊ ၁၀၀း ၃)။
အို…သင်လူသား၊ သင်သည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာ်မူခြင်းများထဲမှ အခြားသောတိရိစ္ဆာန်မျိုးဆက်သစ်များထဲ၌မပါ ဝင်ခဲ့ရဘဲ၊ လူသတ္တဝါမျိုးဆက်သစ်အထဲမှပါဝင်ခွင့်ရ၍ လူအဖြစ်ကိုရရှိခဲ့လို့……ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို မချီးမွမ်းသင့် ပေဘူးလား။ သင်အသက်ရှင်သန်နေနိုင်ရေးအတွက်၊ ကမ္ဘာမိုးမြေ၊ ရေ၊ လေ၊ သက်မဲ့နှင့် သယံဇာတအလုံးစုံတို့ကို ဖန်ဆင်းပေးထားတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို သင်ကျေးဇူးမတင်သင့်ပေဘူးလား။
သမ္မကျမ်းစာက၊ “ထာဝရဘုရားသည် အစိုးရတော်မူသောအရှင်ကောင်းကင်မြေကြီး သမုဒ္ဓရာမှစ၍ ထိုအရပ်တို့၌ ရှိသမျှတို့ကို ဖန်ဆင်းတာ်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” (တ၊ ၄း၂၄)။
“ပထဝီမြေကြီးသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတာ်နှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိ၏” (ဆာ၊ ၃၃း၅.၅)။
တစ်ဖန်၊ “လူတိုင်းစားသောက်ခြင်းငှာ၎င်း၊ မိမိကြိုးစားအားထုတ်သမျှသောအမှု၌ ပျော်မွှေ့ ခြင်းငှာ၎င်း၊ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာအခွင့်ရှိ၏ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း” (ဒေ၊ ၃း၁၃။ ၂း၁၅။ ၆း၂)။
မည်သို့ဆိုစေကာမူ၊ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတာ်ကိုအသိအမှတ်မပြုသောသူများလည်းရှိနေမည်သာဖြစ်သည်ကို သမ္မကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်မရှိဟု မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်၏” (ဆာ၊ ၁၅း၁။ ၅၃း၁)။ “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်ကိုသိလျက်ပင် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်း မသိမမှတ်၊ အချည်းနှီးတွေးဆခြင်း၊သတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏” ဟုလာသတည်း….(ရော၊ ၁း၂၁)။
သမ္မာကျမ်းစာသည် သိပ္ပံပညာကို သင်ကြားပို့ချဖို့ရန် ပြုစုထားသောစာအုပ်မျိုးမဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံပညာက အရာဝတ္ထု များသည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်လာနည်းဆိုသည့်မေးခွန်းအတွက် အဖြေကိုရှာသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုအရာဝတ္ထုများ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသနည်းဆိုသည့်မေးခွန်းကိုဖြေထားသည်။ တစ်နည်းဆိုသော်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ပို၍အခြေခံကျသောမေးခွန်းများနှင့်သက်ဆိုင်ပေသည်။ (သမ္မာကျမ်းစာကိုထိရောက်စွာဖတ်ရှူလေ့လာခြင်း ၊ S.J.De. S. Weerasinghe)
ယနေ့သိပ္ပံပညာဆိုသည်မှာ မရှိခြင်းမှနေ၍ ရှိခြင်း ဖြစ်လာစေရန်တတ်စွမ်းနိုင်သည်မဟုတ်ချေ။ သို့သော်တတ်စွမ်း သူဘုရားသခင်၏ ဖန်တီးခြင်းကိစ္စကို မျှော်ကြည့်လျက်၊ မိမိဖြေရှင်းရန် မတတ်နိုင်သော်လည်းသံသယများကိုမူ မွေးမြူနေ ဆဲရှိ ကြပါသည်။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် မည့်သည့်အရာမျှမရှိခြင်းမှ တည်ရှိခြင်းအဖြစ်ကို ဆက်စပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိသကဲ့သို့၊ တည်ရှိ ခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်း။ တစ်ဖန်၊ အသက်ရှင်ခြင်းမှ လူသားဘဝစသည်တို့ကို မည်သို့မျှဆက်စပ်မပေးနိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အခြေခံနှင့် အယူအဆတို့သည် လူသားတို့၏ တန်ဘိုးနှင့်လွတ်လပ်ခြင်းကိုလည်း မည်သို့သော နည်းများနှင့်မှအကျိုးမပြုနိုင်ဟု ကျွန်တော်လေးနက်စွာယုံကြည်မိသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ဒေါက်တာဂျေ ဝါးနန် မဂ္ဂီး။ နှာ ၆၁)။
ဤမေးခွန်းနံပါတ်(၁၉)ထဲတွင် ဖော်ပြသည့်ကိန်း ဂဏန်းကုဋေကဋာတွက်ကိန်းများတို့သည် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များသာဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရေးအယူဝါဒနှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့် အထူးဖြေကြားရန်လိုမည်မထင်။
သမ္မာကျမ်းစာက၊ “ပုရောဖက်ဉာဏ်သော်၎င်း၊ အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကို ပြောနိုင်သောအခွင့်၎င်း၊ သိပ္ပံအ တတ်သော်၎င်း၊ ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်။” (၁ကော၊၁၃း၈) ။ ယေရှူက၊ “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး မတည်သော်လည်း ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (မ၊ ၄း၁၀)။
“လောကဓာတ်တို့၏ ဘုရားတည်းဟူသော ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်တော်မူထသော မျက်မြင်မရ၊ အရှူပဖြစ်တော်မူထသော၊ တဆူတည်းသောဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအာနုဘော်ရှိ တော် မူစေသတည်း။ အာမင်” (၁တိ၊ ၁း၁၇)။
မေးခွန်နံပါတ် ၁၇ ။
၁၇။ ထာဝရဘုရားသည် အနန ္တမေတ္တာ၊ ဂရုဏာရှင်ဖြစ်ပါလျက်ဘာကြောင့် လူ့ဘဝကိုကြမ်းတမ်းစေသနည်း (မအို၊ မနာ၊ မသေသောကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ အစကတည်းက ဘာကြောင့်မပို့ဘဲ လူသားတို့ကို ဒုက္ခခံစားစေသနည်း)။ အနန ္တ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာရှင်ဆိုသောစကားနှင့်ကိုက်ညီအောင် သုံးနှူန်းဖြေကြားပေးပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁၇) အဖြေ။
မေးခွန်းရှင်အနေဖြင့် မေးခွန်းနံပါတ် ( ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၃၊ ၁၄)တို့တွင် “ဒုက္ခ” ကိုအကြောင်းပြု၍ မေးခွန်းပုံစံ အမျိုး မျိုးဖြင့် မေးခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ၊ တစ်ဘက်မှာလည်း ဖြေဆိုရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာဖက်ရှူဒေါင့်များထဲက ထုတ်ဆောင်၍ ဖြေကြား ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုမေးခွန်းနံပါတ် (၁၇)၌ တစ်ဖန်ထပ်မံ၍ “ဒုက္ခ” ကိုအကြောင်းပြုပြီး မေးခွန်းထုတ်လာပြန်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့သော အတွေးအခေါ်မျိုးကို ထောက်ရှူသည် ရှိသော်၊ မေးခွန်းရှင်အနေဖြင့် လူ့ဘဝတစ်ခုလုံး၏ ဖြစ်စဉ်အလုံးစုံတို့သည် “ဒုက္ခ” ချည်းဘဲဟူ၍ “အဆိုးမြင်ဝါဒ” မျိုးဖြင့် ရှူမြင်သိမှတ်လျက်ရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ် ပါသည်။ လူ့ဘဝ၏ဖြစ်စဉ်အလုံးစုံတို့သည် အဆိုးချည်းဘဲတော့မဟုတ်ပါ။ သု့ချိန်နဲ့သူရှိကြောင်းနှင့် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ကယ်တင်စောင်မနိုင်တော်မူကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ဓမ္မဒေသနာဆရာ၏ သက်သေခံချက်များဖြင့်လည်း ထည့်သွင်း ဆင်ခြင်သင့်လှပေသည်။
“ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည် မိမိတို့အချိန်ရှိ၏။ …….ဘွားချိန်နှင့်သေချိန်၊ …..ဖြိုဖျက်ရသောအချိန်နှင့်တည် ဆောက်ရသောအချိန်………ငိုရသောအချိန်နှင့်ရယ်ရသောအချိန်……ညည်းတွားရသောအချိန်နှင့်ကခုန်ရသောချိန်……… ချစ်ရသောအချိန်နှင့်မုန်းရသောအချိန်……စစ်တိုက်ရသောအချိန်နှင့် စစ်ငြိမ်းရသောအချိန်ရှိ၏ (ဒေ၊၃း၁-၈)။
ဓမ္မဒေသနာဆရာသည် ဘဝ၏အခက်အခဲပြဿနာရပ်များထဲတွင် နစ်မွန်းနေခြင်းဖြင့် ကျေနပ်မနေပါ။ အဖြေရရန် လုံ့လစိုက်ထုတ်ရှာဖွေစူးစမ်းခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့စူးစမ်းရှာဖွေသောအခါ….ငါမြင်ပြီ….ဆင်ခြင်၏…..စုံစမ်းပြီ…… ငါတွေ့သော အရာ……စစ်ဆေးချင့်တွက်သောအခါဟူ၍ ဘော်ပြခဲ့ပါသည်။ သူသည်ဘဝ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုတွေ့ရှိသည်အထိရှာဖွေခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာများသည်လည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိသကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏နုတ်ကပတ်တော်အလင်းအားဖြင့် ဖြေရသည်အထိဆက်လက်ရှာဖွေသင့်သည်။
ဓမ္မဒေသနာဆရာသည် မိမိ၏ဒေသနာကျမ်းဆုံး၌ အသက်တာရည်မှန်းချက်၏အဖြေကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူက အသက်တာဟူသည် ဘုရားသခင်ပေးသောဆုကျေးဇူးဖြစ်၍ ထာဝရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှုင့် အမိန့်တော်လမ်း ပြုမှုအတိုင်း အသက်ရှင်မှသာ၊ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုရှိနိုင်သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့၏။ မိမိအသက်အရွယ်အိုမင်းပြီး၊ အသက်တာ ၏ အဆုံးပိုင်းသို့ရောက်နေသောစာရေးသူက၊ မိမိကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စူးစမ်းရှာဖွေမှုမျိုး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ထပ်မံမပြုလုပ်စေလိုသောကြောင့် “ယခုသက်ပျိုစဉ်အခါ၊ သင့်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုအောက်မေ့လော့” ဟုရေး သားခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် ဒေသနာကျမ်းကဘော်ပြသည့်ရေရှည်တည်မြဲသောသိတင်းစကားဖြစ်ပါသည်။
လူ၌ရှိသောအသက်ဝိညာဉ်သည် တန်ဖိုးအားဖြင့်စကြာဝဠာထက်မက အဖိုးထိုက်လှပေ၏။ ၎င်းအသက်ဝိညာဉ် သည် အာဒံနှင့်ဧတို့ ပြစ်မှားခဲ့စဉ်ကပင် သေမိန့်ကျခံခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ (နံပါတ် ၈၊ ၉၊ ၁၀ အဖြေလွှာကိုကြည့်ပါလေ)။ တစ်ဖန်၊ ဗျာဒိတ်၊ ၃း၁ တွင် “သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိသော်လည်း သေလျက်နေသည်ကို ငါသိ၏” ဟုသာဒိအသင်း တော်ကိုမိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် လူသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လူသေကဲ့သို့ဖြစ်လျက်ရှိ၏ ။ ရုပ်ခန္ဓာအားဖြင့် အသက် ရှင်နေသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်ပိုင်း၌သေနေသောသူဖြစ်ကြ၏။ တစ်နည်းဆိုသော်၊ လူသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ မကယ်တင်နိုင်ပေ။ ဤသို့ဝိညာဉ်ပိုင်း၌သေနေသောသူတို့သည် နောက်ဆုံး၌ထာဝရသေခြင်းတွင် အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ ထာဝရပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း ခံရဦးမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောသေခြင်းကို ဒုတိယသေခြင်းဟုခေ ါ် သည်။
ဤတွင်၊ တမန်တာ်ကြီးရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ထောက်ခံထားသည်မှာ၊ “ငါ့အထဲမှာ ငါ၏ဇာတိပကတိ၌ကောင်းသော အရာတစုံတခုမျှမတည်သည်ကို ငါသိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ကျင့်ချင်သောစိတ်ရှိသော်လည်း ကောင်းစွာကျင့်တတ် သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်၊ ငါသည်ကျင့်ချင်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်၊ မကျင့်ချင်သောအကျင့်ဆိုးကိုကျင့်၏ (ရော၊ ရး၁၈-၁၉၊၂၄) ငါသည် ငြိုငြင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကား။ ဤအသေကောင်းမှ ငါ့ကိုအဘယ်သူကယ်လွှတ် မည်နည်း” ဟူသောမေးခွန်းမျိုးနှင့် သဘောသွားချင်းတူသောမေးခွန်းကို ခရစ်တော်၏ တပည့်တော်တို့ကမေးခဲ့ဘူးသည် တွင်၊ “သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်တာ်မူခြင်းတို့ရောက်နိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏။ ယေရှူသည်လည်း၊ သူတို့ကိုကြည့်ရှူ၍ ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်၊ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော် မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏” (မ၊၁၉း၂၅-၂၆)။
တမန်တော်ဝတ္ထု၊ ၄း၁၁ ဆုံး -၁၂ တွင် “ထိုသခင်မှတပါး၊ အဘယ်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်။ ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါး ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတခုမျှကောင်းကင်အောက် လူတို့တွင် မပေါ်မရှိဟု ပေတရုသည် ထိုသူတို့အား မြွတ်ဆို၏” ။
“ထို့ကြောင့် အကြင်သူသည် ယေရှူအားဖြင့်ဘုရားသခင်အထံတော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏အမှုကို ကိုယ်တော်သည် စောင့်လျက်ကာလစဉ် အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ၊ ရး၂၅)။
သို့ဖြစ်၍ “ညီအစ်ကိုတို့၊ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည် ဝမ်းနည်းသကဲ့သို့ သင်တို့သည် ဝမ်းနည်းမည့်အ ကြောင်း၊ (၁သက်၊ ၄း၁၃) …….(း၁၅) သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအခါ………..(း၁၇) ငါတို့သည် အာကာသကောင်း ကင်၌ သခင်ဘုရားထံတော်သို့ ရောက်စေခြင်းငှာ….မိုဃ်းတိမ်ပေါ်သို့ ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့် အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်” ။
မေးခွန်နံပါတ် ၁၆ ။
၁၆။ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၊ ရေ၊ သစ်ပင်၊ တော၊ တောင်၊ လူ ၊တိစ္ဆာန်တို့ကိုဖန်င်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ (သို့သော်)ထိုထိုသောသက်ရှိတို့အသက်ရှင်ရေးအတွက် ရူစရာ “လေ” ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဟုကျမ်း၌ မပါရှိပါ။ ထို့ကြောင့် လေကိုဖန်ဆင်းသည်ဟူသော ကျမ်း၏စာ အုပ်စာမျက်နှာအထောက်ထားတို့ဖြင့် ခိုင်ခိုင်လုံလုံသက်သေပြပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁၆) အဖြေ။
သမ္မကျမ်းစာတွင် “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာ၊ နက်နဲရာအရပ်ရပ်တို့၌ အလိုတော်ရှိသမျှ တို့ကိုပြုတော်မူ၏ ။ မြေကြီးစွန်းမှမိုဃ်းတိမ်တို့ကို တက်စေတော်မူ၏ ။ မိုဃ်းနှင့်တကွ လျှပ်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘဏ္ဍာ တော်တိုက်ထဲက “လေ” ကိုထုတ်တော်မူ၏” (ဆာ၊ ၁၃၅း၆-၇)။
တစ်ဖန်၊ “ထာဝရဘုရားသည် တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ၊ ပညတ်တော်အားဖြင့်လောက ဓာတ်ကိုတည်တော်မူပြီ၊ ဉာဏ်တော်အားဖြင့်မိုဃ်းကာင်းကင်ကို ကြတ်တော်မူပြီ၊ အသံတာ်ကိုလွှတ်တော်မူသောအခါ မိုဃ်း ရေအသံဗလံဖြစ်တတ်၏၊ မြေကြီးစွန်းမှမိုဃ်းတိမ်ကို တက်စေတော်မူ၏။ မိုဃ်းရွာသည်နှင့် လျှပ်စစ်ပြက်စေတော်မူ၏။ “လေ” ကိုလည်း ဘဏ္ဍာတော်တိုက်ထဲက ထုတ်တော်မူ၏”။ (ယေ၊၁၀း၁၂-၁၃)။
မေးခွန်နံပါတ် ၁၅ ။
၁၅။ အပြစ်သားကို ကယ်တင်ခြင်းသည် အဆိပ်ပင်ရေလောင်းခြင်းသာဖြစ်တော့၏။ ဥပမာ--သင့်အပေါ်စော်ကားချင်တိုင်း စော်ကားသောသူ၊လူ ယုတ်မာအပြစ်မှလွတ်အောင်ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ဆုတောင်း၍ ဘုရားသခင်သည် (လူယုတ်မာ၏ အပြစ်ကိုခံယူပြီး) ထိုလူယုတ်မာအပြစ်ကိုခွင့်လွတ် ကယ်တင်ခဲ့ပါလျှင်သင်ဘယ်လိုခံစားရမည်နည်း။ အဓိပ္ပါယ် ရှိသ လား၊ ရှင်းပြပါ။ ဥပမာ-- သင်ကိုယ်တိုင်အဆူးကိုတက်နင်းပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုဒဏ်ကို ဘုရားသခင်ခံစားသလား။ သင်ခံစားသလား၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင်ဖြေကြားပေးပါ။
မေးခွန်နံပါတ် (၁၅) အဖြေ။
မေးခွန်းရှင်အနေဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်မြတ်သည် အပြစ်သားများတွက် လိုအပ်သည် မှန်စေတာ့။ မိမိကဲ့သို့ပြစ်မရှိသောသူအတွက်ကိုမူ၊ လုံးဝမလိုအပ်သောအရာတခုဖြစ်သည်သာမက၊ ၎င်းရွေးနှုတ်ကယ် တင် ခြင်းတရားသည်ပင်လျှင် မိုက်မဲသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်သာဖြစ်သည်ဟု ရှူမြင်ခံယူထားဟန်ရှိသည်ကို တွေ့ပါသည်။
ထိုကြာင့် သမ္မာကျမ်းစာတွင် “အကြောင်းမူကား၊ ဆုံးရှူံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်တရား သည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောငါတို့၌ ထိုတရားသည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏်။ ငါတို့မူကား၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသောခရစ်၏အကြောင်းအရာကို ဟောပြောကြ၏ ။ ထိုအကြောင်းအရာသည်ကား ယုဒအမျိုးသား ထိမိ၍လဲစရာ အကြောင်းဖြစ်၏ ။ တပါးအမျိုးသား၌ကား မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏” ဟုလာသတည်း ။ (၁ကာ၊ ၁း၁၈-၂၃)။
(၁ယော၊၁း၉ ။ ဇ၊ ၂း၈-၉) ကြည့်လေ။
သမ္မာကျမ်းစာက၊ “ကိုယ်အပြစ်မရှိဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ်လှည့်ဖြားကြ၏။ ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိ…. ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကိုမုသာအပြစ်တင်ကြ၏ ။ နှုတ်ကပတ်တော်လည်း ငါတို့၌မရှိ” (၁ယော၊ ၁း၈-၁၀)။
တစ်ဖန်၊….. “လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီး” (ရော၊၃း၂၃ ။ဆာ၊၅၁း၅ ။ ဒေ၊ရး၂၀) တို့ကိုကြည့်လေ။ “ပညတ်တရားအလုံးစုံကို စောင့်ရှောက်သည်တွင် တစုံတခု၌ မှားမိလျှင်၊ ပညတ် တရားအလုံးစုံကို လွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏” (ယာ၊ ၂း၁၀) ။
(ယေ၊ ၁ရး၉ ။ မ၊ ၅း၂၇-၂၈)ကြည့်လေ။
ပိဋကတ်ကျမ်းက၊ “ပါပသ္မိ၊ ရမတေမနော” ဟုဗုဒ္ဓဘုရားဟောဒေသနာအရ၊ သတ္တဝါတို့၏ စိတ်ဓာတ်သည် မကောင်းမှု၌ အစဉ်ညွတ်ယိမ်းလျက်ရှိသောကြောင့်၊ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ်တို့ဖြင့် ပြုသမျှ၊ ပြောသမျှ၊ တွေးကြံသမျှတို့သည်
ဣသာမစ္ဆရိယ ဒါသ၊ မာန၊ ငါစွဲဆရာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲအစရှိသောတဏှာဒိဌိအစွဲတို့ဖြင့်၊ အမြဲဖုံးလွှမ်းအုပ်စိုးခြင်းကို ခံနေရ သည်ဖြစ်၍ယင်းတို့၏ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံသည် အကောင်းဖြစ်ဖို့ထက်ဆိုးဖြစ်ဖို့သာ များ၍ပေသည်”။ (လူသေလူဖြစ်ဝါဒါနုဝါဒ၊ ဝိနိစ ္ဆယ (ထေရဝါဒစွယ်စုံကျမ်း၊ နှာ-၄၈၂)။
အထက်ဖော်ပြပါကျမ်းအဆိုအမိန့်များကို ထောက်ရှူသည်ရှိသော်၊ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောကြောင့်၊ တမလွန်၌ ယေရှူခရစ်တော်ဘုရား၏ တရားစီရင်ခြင်းကို လူတိုင်းခံယူရမှာဖြစ်သည်။ လောကီသားအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိဖို့ရန် ခရစ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ လူဆိုးတို့၏လက် ထဲ၌ အသေသတ်ခြင်းကိုခံယူတာ်မူပြီ။
အို….မိတ်ဆွေ၊ ….ကိုယ်တော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပါ်မှာ ရိုက်ထားပါ၊ ရိုက်ထားပါဟု အော်ဟစ်ကြွေးကြော်နေသော ယုဒလူတို့ကို အပြစ်မတင်ပါနှင့်။ ဒါတွေအားလုံးသင့်အပြစ်အတွက်၊ အကျွန်ုပ်ပြစ်တွက်၊ ကိုယ်တော်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ဝေဒနာများစွာ ခံတော်မူရခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုက၊ “ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင်၊ ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် ငါတု့ိကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏” (ရော၊၅း၈)။…..
ကိုယ့်ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်၊ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ (ဧ၊ ၂း၉)။
၁၂။ သာမန်ထူးချွန်သောလူပုဂ္ဂုလ်ပင်လျှင် ထူးချွန်လာဖို့ကြိုးစားဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသည့်ခိုင်လုံသော အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်ရှိ၏။ ယခုကဲ့သို့တုနှိုင်းမမှီသောဘုရားဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသူတွင်သူတကာနှင့်မတူ ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်ဖို့ ထူးခြားစွာကြိုးစားဖြတ်သန်း ခဲ့ရသော ခိုင်လုံသောအတ္ထုပ္ပတ္တိသည်ရှိသင့်လှပေသည်။ ရှိကဖော်ပြပါ။ အကျိုးတရားတစ်ခုတစ်ခုတိုင်းတွင် အကြောင်းတ ရားမရှိကအကျိုးတရားပေါ်ရိုးထုံးစံရှိပါသလား။ အခိုင်အမာဖြေကြားပးပါ။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁၂) အဖြေ။
“ဘုရားနှင့်ကမ္ဘာ၊ ဘုရားနှင့်သတ္တဝါ၊ ဘုရားနှင့်တရား၊ အဘယ်ကဦးပါနည်းဟု ဆင်ခြင်ရန်ရှိ၏။ ဘုရားပြီးမှ ကမ္ဘာ၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာတည်ပြီးမှဘုရား၊ သတ္တဝါဖြစ်ပြီးမှဘုရား၊ သို့မဟုတ် ဘုရားရှိတော်ပြီးမှသတ္တဝါ၊ ဘုရားကဟောပြီးမှတရား၊ သို့မဟုတ် တရားပျင့်ပြီးမှဘုရား၊ ဤစကားများကိုများစွာဆင်ခြင်စဉ်းစား၍ခွဲထားရမည်။
ပိဋကတ်ပရိတ်ကြီးပါဋိတော်ရတနာသုတ်၍၊ ဝရောဝရညု၊ ဝရဒေါ၊ ဝရဟရော၊ အနတ္တရော၊ ဓမ္မရံအဒေသ ယိဟု ဟောတော်မူသည်။ အနက်ကား၊ ဝရော၊ မြတ်သော၊ ဝရညု၊ မြတ်သောတရားကိုသိတော်မူတတ်သော၊ ဝရဟောရော၊ မြတ်သောစီးပွားကို ဆောင်ရွက်တော်မူတတ်သော၊ ဝရဒေါ၊ မြတ်သောလောကုတ္တရာတရားကိုလည်း ပေးတော်မူ တတ် သော၊ အနုတ္တရော၊ လွန်သောသူမရှိသောမြတ်စွာဘုရားသည် ဓမ္မဝရံ၊ ပရိယတ္တိတရားတော်မြတ်ကို အဒေဿယိ၊ ဟော တော်မူ၏” ဟုလာသောကြောင့်ဘုရားကဟောမှ တရားတော်ရှိကြောင်း၊ ထင်ရှားလေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသည် တရားတော်အရင်ရှိနှင့်သတည်း။
သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဘုရားသခင်ဟူသော ပုဂ္ဂိုလ်တော်သည် ပကတိအားဖြင့် ဘုရားဖြစ်တာ်မူသောကြောင့် သယမူ္ဘဖြစ်တော်မူ၏။
“ဘုရားသခင်ကလည်း၊ ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏” (ထွက်၊၃း၁၄)။ ပါရမီဖြည့်ကျင့်သောကြောင့်ဖြစ်သော ဘုရားမဟုတ်။ ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားဖြစ်၏။
“ကောင်းမြတ်စုံလင်သောဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည် အလင်းတို့အဘထံတော်မှ သက်ရောက်သည်ဖြစ်၍ အထက် အရပ်ကလာကြ၏။ ထိုအဘသည် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ၊၊ (ယာ၊၁း၁၇)၌ လာသည့် အတိုင်း မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် စုံလင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍၊ သာ၍စုံလင်ရန်မလို၊ မစုံလင်သောသတ္တဝါတို့သာစုံလင် အောင်ကျင့်ရ၊ ပါရမီဖြည့်ရလေသည်။
ထိုကျမ်းစကား၌၊ “ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ” ဟုလာသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ရှေးကမ္ဘာအဆက်ဆက်က ဘုရား ဖြစ်၍ နောက်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်တွင်လည်း ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ (ဟေရှာ၊၄၁း၄ ။၁တိ၊၁း၁၇ ။၂ပေ၊၃း၈ ။ဗျာ၊၁၀း၇)တို့ကို ဘတ်လေ)။
မင်္ဂလာရှိတော်မူေသောဘုရားသခင် (၁တိ၊ ၁း၁၁) မင်္ဂလာရှိသောတပါးတည်းသောအရှင်ဖြစ်တော်မူထသော (၁တိ၊ ၆း၁၅-၁၆) လာသည့်အတိုင်း၊ ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည် မင်္ဂလာရှိရန် တရားကိုကျင့်ရသည်။ ပါရမီကိုဖြည့်ရသည်မဟုတ်ချေ။ ဗုဒ္ဓေါဝါဒသင်္ခေပကျမ်းနှင့် ခရစ်ယောဝါဒသင်္ခေပကျမ်းမှ ဒေါက်တာဦးသာထင် (ပြည်) နှာ၊ ၈၉။
“မှန်သောဘုရားသခင်၏အဖြစ်ကို ပိဋကတ်သက်သေခံသည့်အတိုင်းပြဆိုရလျှင်၊ “သရံမူ္ဘတံ” ဟူ၍ခေါ်သည်။ သရံ၊ သူမဆိုအလိုလို၊ ဘူတံ၊ ထင်ရှားဖြစ်တော်မူသောဘုရား၊ အဓိပ္ပါယ်ပြန်ဆိုလျှင် အလိုလိုဖြစ်တော်မူသာဘုရား၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်မကင်းသော တစုံတယောက်၊ လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့က မွေးဖွားသောမစုံလင်၍တရားကျင့်ရသောလူ ဘုရား၊ ဝဋ်ရှိသောလူဘုရားတို့ကဲ့သို့မဟုတ်ချေ။ မှန်သောဘုရား၏အစနှင့်ဘုရား၏အဖြစ်တော်ကိုလူသည် အဘယ်နည်း အားဖြင့်မှ ကြံစည်၍မရနိုင်။ ကြံစည်၍မသိနိုင်။ ဘုရားဇာတိတော်၊ နဂိုရ်တော်ကို၎င်း ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသော လောကဓာတ်ကိုသော်၎င်း၊ ကြံစည်ဘို့ရာမဆိုထားဘိဦး၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ ထားတော်မူသော ပန်းတပွင့်ကို၎င်း၊ ကြက်၊ ငှက်များတို့၏ အမွှေးအတောင်များတို့သည် ဘာကြောင့်တမူထူးခြား၍ရောင်စုံဖြစ်လာပုံကို၎င်း ဆုံးခန်းကုန်စင် အောင် သိနိုင်ဘို့ရာကို ကြံစည်ပါဦး”။
(တိပိဋကတ်ဝိနိစ ္ဆယကျမ်း၊ မောင်ပန်းရည်၊ ဒုပိုင်း။ နှာ-၁၅)။
မေးခွန်နံပါတ် ၁၁ ။
၁၁ ။ မွေးခြင်း၊ သေခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြေကွဲခြင်း စသည့်အရာရာတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းသာ ပြုရမည်ဟုဆိုပါက သူတစ်ပါး၏ စော်ကားခြင်းခံရသောအမျိုးကောင်းသမီးတစ်ဦး၏ အဖြစ်ဆိုးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်းဟု သဘောသက်ရောက်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ဤသို့မှန်ပါက ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်သည် မည်သို့နည်း။
မေးခွန်းနံပါတ် (၁၁) အဖြေ
သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ မိမိမေးလိုသောအကြောင်းအချက်များကို ကျမ်းအမည်၊ အခန်းကြီးဘယ်လောက်၊ အခန်းငယ် ဘယ်လောက်ဟု၍ ဖော်ပြထားမှသာလျှင် အဆိုပါကျမ်းပိုဒ်၏ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို ခြုံငုံစီစစ်၍ ဆီလျော်သင့်မြတ်သည့် အဖြေကို ထုတ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဤမေးခွန်းတံပါတ် (၁၁) တွင် ကျမ်းညွှန်းကျမ်းထောက်မပါဘဲ မိမိကိုဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်အားပြစ် တင်ရှူတ်ချဖို့သာ ဆန္ဒစောနေသည်ဟူ၍ ကောက်ချက်ချရမည်သာဖြစ်သည်။
ယေရှူက၊ “မကောင်းသောသူသည် မကောင်းသောဘဏ္ဍာတိုက်ထဲက၊ အကောင်းသောအရာတို့ကို ထုတ်ဖော်တတ်၏” (မ၊ ၁၂း၃၅) ဟုမိန့်တော်မူ၏ ။
တစ်ဖန်၊ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက “အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူတို့သည်၊ ဘုရားသခင်ကိုသိလျက်ပင် ဘုရား သခင်ကိုချီးမွမ်းသင့်သည်အတိုင်း မချီးမွမ်း၊ ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမသိမမှတ်၊ အချည်းနှီးတွေးဆခြင်း၊ သတိမရှိသောစိတ် နှလုံးမိုက်မဲခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ……ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကိုသူတို့၏ကိလေသာစိတ်ညစ်ညူးခြင်းလက်သို့ အပ်လိုက်တော်မူ၏” (ရော၊ ၁း၂၁ ။ ၁း၂၄-၂၅)။
ဤမေးခွန်းနံပါတ် (၁၁)တွင်၊ “သူတစ်ပါးစော်ကားခြင်းခံရသောအမျိုးကောင်းသမီးတစ်ဦး၏အဖြစ်ဆိုး” ဆိုသည့် ဥပမာမျိုးကို မေးခွန်းရှင်၏စိတ်ကူးထဲ၌ ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုထောက်ရှူသည်ရှိသော်၊ အထက်ဖော်ပြပါကျမ်းချက်တို့သည်မှန်ကန်ကြောင်းသိသာထင်ရှားလျက်ရှိ၏။
သမ္မကျမ်းစာက “တရားမဲ့ဖြစ်သောအချည်းနှီးစကားကို ရှောင်လော့။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုစကားသည်၊ မတရား သောအမှုတို့ကို ပွားများစေလိမ့်မည်။…….မိုက်မဲ၍ ပညာကင်းသော ပုစ္ဆာအမေးတို့သည် ရန်ပွားစေတတ်သည်ဟု သိမှတ်၍ ပယ်ရှားလော့” (၂တိ၊ ၂း၁၆-၁၇။ း၂၃)။
ကြယ်စင်ရွေ့အောင်၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်၊ စိမ်းရောင်ရွက်လှ၊ မဆင်သနိုင်၊ မြေမှတောင်ဖျား၊ မကျော်လွှားနိုင်၊ ရေသားကြမ်းပြင်၊ ဆုံးမမြင်နိုင်၊ သို့စင်လျက်နှင့်၊ မာနတက်၍၊ ဖြေခက်လူသား၊ စိတ်ထောင်ထားသည် တရားမရှိ လွန်းတကား။ နှင်းနုနေခြည်၊ မဝေသီနိုင်၊ တစ်လီဆည်းဈာ၊ ညကလျာနှင့်၊ စန္ဒာအလှ။ မဆင်သနိုင်၊ ဘာမျှမပိုင်၊ သင်မနိုင်ပဲ၊ ပိုင်သူခင်၊ ဖန်ဆင်းရှင်ကို တွင်တွင်ပြစ်မှား၊ သံသယပွားသည် ဘုရားမသိလွန်းတကား။
မေးခွန်နံပါတ် ၈, ၉ , ၁၀ ။
၈။ ချမ်းသာစေလိုသည်ဟုဆိုပါက ယခုခန္ဓာရှိသူတိုင်းသည် ဆင်းရဲခြင်းအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံနေကြသည်။ ဘုရားသခင်ဖြစ်စေလိုသည့်ချမ်းသာမဖြစ်သည်မှာ အနန ္တတန်ခိုးတော်မရှိ၍ ဘာအစွမ်းမှမရှိ၍ ဖြစ်ရသည်ဟုဆိုက ဘယ်လိုပြန်လည်ဖြေပေးနိုင်ပါသနည်း ။
၉။ လူသားတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးတို့သည်သေချာလေ့လာကြည့်ပါက (ခန္ဓာရှိသူတိုင်း ဒုက္ခမက်ငးကြောင်း သေချာလှပါသည်) ။ ဒါကြောင့်လူသားတို့ကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားသည် ချမ်းသာပေးသလား၊ ဆင်းရဲပေးလားဆိုတာ ဖြျေပေးပါ။
၁၀။ လူသားတို့ကို မေတ္တာဂရုဏာတော်ဖြင့် ဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုပါက မည်သူတစ်ဦးကမျှ မလိုချင် မတောင့်တ (အိုရခြင်း၊ နာရခြင်း၊ သေရခြင်း) ဒုက္ခဆိုးကြီးကိုပါ ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ ထာဝရဘုရား၏မေတ္တာကိုရှင်းပြပါ။
မေးခွန်နံပါတ် ၈, ၉ , ၁၀ ၊ တို့၏အဓိကဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ချင်းတူညီပါသဖြင့် တစ်ပေါင်းတည်းဖြေဆိုလိုက်ပါရစေ။
လူ၏အကြောင်းကို စိစစ်ဆင်ခြင်ရာတွင် အဓိကသအချက်ဖြစ်သော လူ၏အစကို သိဖို့ရန် အမှန်ပင်လိုအပ် ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်များတို့၏ဆောင်ရွက်ချက်များထဲတွင် ရောဂါတစ်မျိုးချင်း၏ စတင်ဖြစ်ပွားလာ ခဲ့သည့်အဓိကတရားခံကို ဖော်ခုတ်ပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားလာသည့်အဓိကတရားခံကိုသိမှသာလျှင် တိကျသောကုသမှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ “အစကွယ်၊ အလယ်မောက်၊ အဆုံးပြယ်သည်” ဟူသောဆိုရိုးစကားသည် ဤနရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လှပေသည်။
ပိဋကတ်ကျမ်းလာအရ၊ ရှင်ဂေါတမဗုဒ္ဓက၊ “ရဟန်းတို့ဤသံသရာ၏အစကိုမသိနိုင်၊ အဝိဇ္ဓာဖုန်းကွယ်အပ်ကုန်၊ တဏှာနှောင်ကြိုးဖြင့် ဖွဲ့ချည်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ဤဘဝမှထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှဤဘဝသို့ ပြေးသွားကျင်တည်ကြရသည့်သတ္တဝါတို့၏ရှေးအစွမ်းသည်မထင်နိုင် (မသိနိုင်)။
ရဟန်းတို့၊ ဥပမာသော်ကား၊ ယောက်ျားသည် ဤဇမ္ဓူ ဒိပ်ကျွန်း၌ ရှိသမျှထင်းမြက်သစ်ခက်သစ်ရွက်ကိုဖြတ်၍၊ တပေါင်းတည်းစုရုံးပြီးလျှင် လက်လေးသစ်မျှကျည်းသားလောက်ပြု၍ ဤကားငါ၏အမိ၊ ဤကား ငါ့အမိ၏အမိ စသည်ဖြင့် ချ၍ ရေတွက်သော် ဤဇမ္ဓူဒိပ်ကျွန်း၌ရှိသမျှမြက်ခင်းသစ်ခက်သစ်ရွက်သာကုန်ရာ၏။ ထိုယောက်ျား၏အမိအဆက်ဆက်တို့ကား၊ မကုန်နိုင်ကြရာ” (အနမ-တဂ္ဂသံယုတ်၊ ကိ၊ ဏကဌသု�reaks=true
မေးခွန်နံပါတ် ၆ နဲ့ ၇။
၆ နဲ့ ၇။ ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုရာတွင် ဘယ်အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍ ဖန်းဆင်းပါသနည်း။
နံပါတ် (၆+၇) အဖြေ ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၊ ၄း၁၁ တွင် “အိုထာဝရဘုရား-----ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုအရာတို့သည် အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ ။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းအသရေတော်ကို ခံစားထိုက်တော်မူ၏” ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
ရှင်းပါသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် သူဖန်ဆင်းလို၍ ဖန်ဆင်းခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ သူကျေနပ်နှစ်သက်၍ ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့လူသားများသည် စကြာဝဠာအနန ္တကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြဿနာမဟုတ်၊ သူနှစ်သက်မြတ်နိုးသည့်အတွက် သူစိတ်ကြိုက်ဖန်ဆင်းထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ အထူးတလည်ဉာဏ်ချဲ့၍ စဉ်းစားစရာကိစ္စမဟုတ်ချေ။ အနန ္တတန်ခိုးရှိင်သည် ကျွန်တော်တို့လူသားများအား ဖန်ဆင်းရာတွင် သူသင့်တော် မည်ထင် သံကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းသွားပါသည်။ ယုတ်စွအဆုံး ကျွန်တော့်ကို “မဂ္ဂီး…မင်းဒီကမ္ဘာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ချင် သလဲဟု မေးပါသလား။ သူခွဲခန့်မှတ်သားရာအရပ်တွင် ကျွန်တော်လူလာဖြစ်ရပါသည်။ “အအေးကြိုက်၍ ပြင်ဦးလွင်တွင်မွေးပါရစေ” ဟူ၍ တောင်းဆိုမရနိုင်ပါ။ ဒူးရင်းသီးကြိုက်၍ “မွန်ပြည်နယ်တွင် လူဖြစ်ပါရစေ” ဟုဆို၍ နေရာရွေးလို့မရပါ။ ဘုရားသခင်သည် သူနှစ်သက်မြတ်နိုးသည့်စိတ်နှင့် သူ၏အလိုဆန္ဒများနှင့် ကိုက်ညီသောဤကမ္ဘာနှင့် စကြာဝဠာကို ဖန်ဆင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယောဘဝတ္ထု ၊၃၈း၇ တွင် “နံနက်ကြယ်တို့သည် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းသီချင်းဆို၍ ဘုရားသခင်သားအပေါင်း တို့သညဝမ်းမြောက်သဖြင့် ကြွေးကြော်ကြစဉ်” ဟူသောကျမ်းချက်နှင့် ဟေရှာယ၊ ၄၃း၇ တွင် တွေ့ရသော “ဝေးသောအရပ် မြေကြီးစွန်းမှ ငါ့သား၊ သမီးတည်းဟူသော ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သောသူ၊ ငါ၏ဘုန်းအသရေဖို့ ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၍ ဧကန်စင်စစ် လုပ်ပြီးသောသူအပေါင်းတို့ကို ဆောင်ခဲ့လော့” ဆိုသည့်ကျမ်း ချက်များ၏ အထောက်အထားအရဆိုရသော် ဘုရားသခင်သည်သြကာသကမ္ဘာလောကကို သူပျော်ရွှင်ကျေနပ်စွာဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ဘုန်းအသရေတော်ထင် ရှားစေရန် သူဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြနေပါသည်။ ထို့အပြင် သမ္မကျမ်းစာကို သေချာစွာဖက်ရှူလေ့လာသောအခါ လူသားအား ဘုရားသခင်သည်ချစ်၏။ နှစ်သက်၏။ အကျွမ်းတဝင်နေလို၏ဆိုသည့်အချက်များပေါ်လွင်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် ကမ္မာမြေကြီးပေါ်မှ လူသားများကို ဖန်ဆင်းခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ လွတ်လပ်သော အတွေး အခေါ်နှင့် ပေါင်းစည်းမိတ်သဟာယဖွဲ့ လိုသောဘုရားသခင်သည် စက်ရုပ်များ၊ ဉာဏ်မရှိသောဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသော အရာများကို မတပ်မက်ချေ။ ထို့ကြောင့်များစွာတန်ဘိုးမြင့်မားသောလူသားတို့သာလျှင် မြင်တွေ့လိုသောကြောင့်အသက် ကိုဖန်ဆင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူထားရပါမည်။
ဘုရားသခင်အား မယုံကြည်ခြင်း၊ ဝေဖန်ရှူံ့ချခြင်း၊ ဖျက်ဆီးလိုခြင်း စသည့်အတွေးအခေါ်များနှင့် လုံးချာ လိုက်နေသော ဤကမ္မာပေးတွင် လူသားတဦးအနေနှင့် အမွန်မြတ်ဆုံးအလုပ်သည် ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သားတော် (သို့မဟုတ်) ဘုရားသခင်၏ကိုယ်စား လူ့လောကသို့သက်ဆင်း၍ ကယ်တင် ခြင်းဆုကျေးဇူးကို ပေးခဲ့သူခရစ်တော်ရှင်ကို အကြွင်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသခင်ကို လက်ခံ လိုက် ခြင်း၊ ယုံကြည်လိုက်ခြင်းသည် ယခုလူသားများ ကြွေးကြော်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော “လွတ်လပ်ခွင့်” အစစ်အမှန်ကို ရရှိရေးအတွက် ပြိုင်ဘက်မရှိသော လမ်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သောမရဏငရ ဲလမ်း နှင့် အပြစ်၏နှောင်းဖွဲ့ မှုဘဝမှလွတ်မြောက်ရန် လမ်းကြောင်းကို ယေရှူခရစ်တော်မှလွဲ၍ မည်သူကမျှမပေးနိုင်ဟုကျွန်တော် ယုံကြည်ပါသည်” ။
ယေရှူက “ထာဝရအသက်ဟူမူကား၊ မှန်သော ဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တာ်မူသော ကိုယ်တော်ကို၎င်း၊ စေ လွတတော်မူသောယေရှူခရစ်ကို၎င်း သိကျွမ်းခြင်းတည်း” (ယော၊ ၁ရး၃)။
ထာဝရဘုရားသည် ကမ္ဘာကိုဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုရာတွင် ဘယ်အကျိုးကိုမျှော်ကိုး၍ ဖန်းဆင်းပါသနည်း။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၅ ။
၂၅။ ဓမ္မဟောင်းကို မည်သူဟော၍၊ ဓမ္မသစ်ကို မည်သူဟောပြောပါသနည်း။ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးး၏ ဟောပြောချက် အဘယ် ကြောင့် ဆန့်ကျင်နေပါသနည်း။
တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက “ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်း တော်မူသော အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်း ( ၂တိ၊ ၃း၁၆) နှင့် တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုက ထပ်လောင်း၍ သက်သေခံရာတွင် “အနာဂတ္တိ စကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဘူးသည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်တွန်းတော်မူဖြင်းကိုခံရ၍ ဟောပြောကြကြောင်း (၂ပေ၊၁း၂၁) နှင့် “သူတ့ိုထဲ၌ရှိသော ခရစ်တာ်၏ဝိညာဉ်” က ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၊ မိမိတို့ခံယူ၍ သက်သေခံဟောပြောကြ၏ (၁ပေ၊ ၁း၁)။
(၁သက်၊ ၂း၁၃) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ကြကြောင်းကို ခရစ်တော် ဘုရားကိုယ်တော်တိုင် မိန့်ဆိုထားသည်မှာ “ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်းများကိုဖျက်ပယ်ခြင်းငှာ ငါလာသည်ဟု မထင် ကြနှင့်၊ ဖျက်ပယ်ခြင်းငှာ ငါလာသည်မဟုတ်၊ ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ ငါလာသတည်း။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီး မပျက်စီးမှီတိုင်အောင်၊ ပညတ္တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဗိန္ဓုတလုံးမျှပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မှီ မပျက်စီးရ” (မ၊ ၅း၁၇-၁၈)။
“သမ္မာကျမ်းစာသည် အဘယ်ကြောင့် တမူထူးကဲသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သနည်း”။
သမ္မာကျမ်စာသည် ဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့ဆိုခဲ့သောကြောင့် တမူထူးကဲသောစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သမ္မာကျမ်းစာဆိုသည့်စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် ရေးသားခဲ့ရသောနှစ် ပေါင်းသည် အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း “တစ်ထောင့်ငါးရာ” ကြာမြင့်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနှစ်ပေါင်း(၁၅၀၀)အတွင်းတွင် ပါဝင်ရေးသားသူစာရေးဆရာအယောက်ပေါင်းလေးဆယ်ခန့်ရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် စာရေးဆရာနှစ်ဦးခန့်သာ ခေတ်ပြိုင်လူ သားများဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျန်လူများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မည်သူမည်ဝါမှန်းမသိခဲ့ကြပေ။ သိခွင့်လည်းမကြုံခဲ့ကြပေ။ ထိုသူတို့စု ပေါင်းရေးသားလိုက်သောသက်တမ်းနှစ်ပေါင်း(၁၅၀၀) ရှည်လျားသော အချိန်ကာလ၏နောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်ထွက်လာ ခဲ့သော ဤသမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် ရင်သပ်ရှူမောဘွယ်ရာကောင်းလောက်အောင် မှားယွင်းတိမ်းချော်မှုအလျင်းမရှိ၊ ပကတိ ညှိနှိုင်းရေးသားထားသကဲ့သို့ ညီညွတ်နေသည်ကိုတွေ့ကြရသည်။
သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် ဘုရားသခင်၏စာအုပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သောထင်ရှားသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုကို လည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်တွင် အကြိမ်ပေါင်း(၂၅၀၀)တိတိတွေ့မြင်ရသော “ထာဝရဘုရားမိန့်တော် မူသည်ကား” ဟုအစချီထားသောနှုတ်ထွက်စကားများနှင့် အမိန့်များကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ထံမှ လူသားများဆီသို့ အသက်ဆက်ပေးထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပေသည်။ (ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှ ဒေါက်တာ ဂျေ၊ ဝါးနန် မဂ္ဂီး၊ နှာ ၇- ၉)။
ေရးသားတင္ျပသူ Truth on October 07, 2020 1 comment:
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွင် ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝရှိပါသလား။
နံပါတ် (၄) အဖြေ။
ဒေသနာကျမ်း၊ ၁၂း ၇ ထိုကာလ၌ မြေမှူန့် သည်နေရင်းမြေသို့၎င်း၊ ဝိညာဉ်သည်အရင်ပေးတော် မူသောဘုရားသခင်ထံသို့၎င်း ပြန်သွားရလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည် အာဒံအား ဝိညာဉ်နှင့်ခန္ဓာပြည့်စုံသော၊ အသက်ရှင်သောတဦးအဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လောကထဲသို့အပြစ်၏ရလဒ်ဖြစ်သော သေခြင်းတရားဝင်ရောက်လာခဲ့သောအခါ၌ လူ၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်ဆိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာသည် သေဆုံးပြီးနောက် မြေမှူန့်အဖြစ်သို့ပြန်ရောက်သွားပြီး၊ နံပိုင်းနှင့်ဆိုင် သော ဝိညာဉ်သည်အရင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်သွားပေသည်။ တစ်ဖန်၊ ဟေဗြဲ သြဝါဒစာ၊ ၉း ၂၇ တွင် “လူသည် တခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ (ဘူရားသခင်၏) တရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသည်” ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၊၂၀း ၁၂-၁၅ တွင် “သေလွန်သောသူအကြီးအငယ်တို့သည် ပလ္လင်တော်ရှေ့မှာ ရပ်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏။ စာစောင်များကိုဖွင့်ထား၏။ အသက်စာစောင်တည်းဟူသောအခြားတပါးသောစာ စောင်ကိုလည်း ဖွင့်လေ၏။ သေလွန်သောသူတို့သည် မိမိတို့ အကျင့်အတိုင်း စာစောင်တို့၌ ရေးထားချက်များနှင့်အညီ တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။……. လူအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့အကျင့်အတိုင်း တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ ။…….အသက်စာစောင်၌ စာရင်းမဝင်သောသူရှိသမျှ တို့ကိုလည်း မီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချလေ၏ ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၊ ၂၀း၁၀။ …….ကန့်နှင့်ရောနှောသော မီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လျှင်၊ သူတို့သည် နေ့ညဉ့် မပြတ်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကို ခံရကြလတံ့။ အသက်စာစောင်၌ စာရင်းဝင်သောသူတို့ အတွက် “ကောင်းကင်မှကြီးသောအသံကား ဘုရားသခင်၏တဲတော်သည် လူတို့တွင်ရှိ၏ ။ လူတို့နှင့်အတူ ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင် သူတို့ နှင့်အတူရှိနေ၍ သူတို့၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိ၌ မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော်မူမည်။ နောက်တဖန်သေဘေးမရှိရ၊ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းအော်ဟစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း လည်း မ ရှိရ ။ အကြောင်းမူကားရှေးဖြစ်ဘူးသောအရာတို့သည် ရွေ့သွားကြပြီ (ဗျာ၊ ၂၁း၃-၄)။ နောက်တဖန်ကျိန်ခြင်းဘေးတစုံတခုမျှမရှိ။ ထိုမြို့၌ဘုရားသခင်နှင့်သိုးသငယ်၏ ပလ္လင်တော်ရှိ၍ ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တို့သည်ဘုရားဝတ်ကိုပြုကြလိမ့်မည်။ မျက်နှာတော်ကိုမြင်ရ၍ သူတို့နဖူး၌လည်း နာမတော်ရေးထားလျက်ရှိလိမ့်မည်။ ထိုမြို့၌ ညဉ့်မရှိရ။ ဆီမီးကိုအလိုမရှိ၊ နေ၏အရောင်ကိုလည်းအလိုမရှိ၊ အကြောင်းမူကား ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည် သူတို့၌ ရောင်ခြည်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၍ သူတို့သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံရကြလတံ့” ( ဗျာ၊ ၂၂း၃-၅)။
ေရးသားတင္ျပသူ Truth on October 06, 2020 No comments:
၁။ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်က ထာဝရဘုရားသခင်ဘယ်မှာနေပါသနည်း။
၂။ ထာဝရဘုရားကို မည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ ထာဝရဘုရားသခင်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာရသည့် ထာဝရဘုရား၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုဖော်ပြပါ။
အဖြေ။။ မေးခွန်းနံပါတ် (၁)နှင့်(၂)တို့၏ အဓိကမေးလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ချင်းတူပါသဖြင့် ၎င်းမေးခွန်းနှစ်ရပ်ကို တစ်ပေါင်းတည်းဖြေဆိုပါရစေ။
အတုမရှိသောဘုရားသခင်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလောကဓာတ်ကို၎င်း၊ မကြံစည်အပ်သည်ကိုပိဋ္ဋကတ်ကျမ်းလာသည့်အတိုင်းပြဆိုပေအံ့။
လောကီ၊ လောကကို။ နစိန္တာတံ၊ မကြံစည်အပ်သည်ကို စိန္တာယဿ၊ ကြံစည်သောသူအား ဥမ္မာတဿ၊ သူရူးနှင့်လည်းတူ၏။ အဝိဂတဿ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်သောသူနှင့်လည်းတူ၏။
ဗုဒ္ဓဿ၊ အတုမရှိသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုလည်း နစိန္တာတံ၊ မကြံစည်သည်ကို စိန္တာယဿ၊ ကြံစည်သောသူအား ဥမ္မာတဿ၊ သူရူးနှင့်လည်းတူ၏။ အဝိဂတဿ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်သောသူနှင့်လည်းတူ၏ဟု လောကဒီပကာသာရကျမ်း၌ပြဆိုထားပါသည်။
၁။ ဗုဒ္ဓဝိသယော။ ဘုရားသာသိအပ်သည်ကို မကြံစည်အပ်။
၂။ ဈာယိဿ။ ဈာန်အဘိညာဉ်အရာကို မကြံစည်အပ်။
၃။ ကမ္မဝိပါကော။ ကံ၏အကျိုးပေးပုံကို မကြံစည်အပ်။
၄။ လောကစိန္တာ။ နေ၊ လ စသောလောကတည်ပုံကို မကြံစည်အပ်။
ကြံစည်လျှင် ရူးသွပ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းအဖို့ဖြစ်၏။
မှန်သောဘုရားသခင်၌ လူအပေါင်းတို့ထက်သာလွန်ထူးကဲတော်မူသော အစိနေ ္တယသဒ္ဒါ၊ အမမေယသဒ္ဒါတို့နှင့်အညီ ဂုဏ်တော်၏အချုပ်ကိုဆိုလျှင် လေးပါးရှိ၏။ လေးပါးဟူမူကား (၁) ရူပအစိနေ ္တယ (၂) ဣဒ္ဓိအစိနေ ္တယ (၃) ညဏအစိနေ ္တယ (၄) ဝါစအစိနေ ္တဟူ၌ဂုဏ်ပုဒ်လေးပါးရှိတော်မူ၏။ ထိုအနန ္တဂုဏ်ပုဒ်လေးပါး မဂဓပါဋ္ဋိစကားတို့ကို အဘိဓာန်ကျမ်းလာသည့်အတိုင်း မြန်မာလိုပြန်ဆိုလျှင် ရူပါအစိနေ ္တယပုဒ်၌ ရူပါ၊ ရုပ်၊ အစိနေ ္တယ၊ မကြံစည်အပ်။ အမမေယ၊ မနှိူင်းယှဉ်အပ်၊ ဣဒ္ဓိအစိနေ ္တယပုဒ်၌၊ ဣဒ္ဓိ၊ တန်းခိုးတော်၊ အစိနေ ္တယပုဒ်၌ ဉာဏ၊ ဉာဏ်တော်၊ အစိနေ ္တယ၊ မကြံစည်အပ်၊ အမမေယ၊ မနှိူင်းယှဉ်အပ်။ဝါစအနေ ္တယ၊ ဝါစ၊ စကားတော်၊ အစိနေ ္တယ၊ မကြံစည်အပ်၊ အမမေယ၊ မနှိူင်းယှဉ်အပ်။ ထိုသို့မကြံစည်အပ်၊ မနှိူင်းယှဉ်အပ်သောအနန ္တရုပ်တော်၊ အနန ္တတန်ခိုးတော်၊ အနန ္တဉာဏ်တော်၊ အနန ္တစကားတော်အပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူမှသာလျှင် လူအပေါင်းတို့၏ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူသော
ကျေးဇူးတော်အစုံ၊ ဂုဏ်တော်အနန ္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည် အဘယ်အချိန်ကာလကစ၌ အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၊ အဘယ်ဒေသအရပ်တို့တွင် ဖြစ်သနည်းဟုကြံစည်၍မေးဘွယ်ရာမရှိ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မှန်သောဘုရားသည် လောကီပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်၊ လောကုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူ၏။ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တတရားတို့နှင့်မကင်းသော သင်္ခါရနယ်၊ လောကဘုံအတွင်းမှာ မွေးဘွားခြင်းကိုခံသောပုဂ္ဂုလ်မဟုတ်၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းစင်တော်မူ၍ နိစ္စ၊ သုခ၊ အတ္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော လောကုတ္တရာဘုံရှင်၊ လောကုတ္တရာ၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်၊ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တနယ်အတွင်းမှာ မွေးဘွားခြင်းကိုခံရသည့် ပညတ် သတ္တဝါဖြစ်ကြကုန်သော လောကီဘုံသားလူအပေါင်းတို့က လောကီဉာဏ်နု၊ မံသစက္ခုပညတ်မျက်စိဖြင့် ကြည့်ရှူ၍မေးဖွယ်ကြံဖွယ်ရာမဟုတ်ချေ။
(တိပိဋကတ်ဝိနိစ ္ဆရကျမ်း၊ မောင်ပန်းရည်၊ ဒု၊ တွဲ၊ နှာ ၁၄-၁၅)
သမ္မာကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း၊ ပရောဖက်ဟေရှာယ “ထာဝရဘုရားးမိန့်တော်မူသည်ကား……..ငါ့ရှေ့မှာဖန်ဆင်းရာထဲ က အဘယ်ဘုရားသခင်မျှမဖြစ်၊ ငါ့နောက်မှာလည်း အဘယ်ဘုရားသခင်မျှမရှိရာ……နေ့ရက်ကာလမဖြစ်မှီ၊ ငါသည်ဘုရားဖြစ်၏ (ဟေရှာ၊ ၄၃း၁၀-၁၃)။ “ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏” (ထွက်၊ ၃း၁၄)။ ငါသည်အာလဖဖြစ်၏။ သြမေဃလည်းဖြစ်၏။ အဦးဆုံးသောသူ၊ နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။ အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏” (ဗျာဒိတ်၊ ၂၂း၁၃)။
“ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကား မိုဃ်းကောင်းကင်သည် မြေကြီးထက်သာ၍မြင့်သကဲ့သို့၊ ငါ၏အကျင့်သည်သင်တို့၏အကျင့်ထက်၎င်း၊ငါ၏အကြံအစည်သည် သင်တို့၏အကြံအစည်ထက်၎င်း သာ၍မြင့်၏” (ဟေရှာ၊ ၅၅း၉)။
“သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဇာတိတော်ကို စစ်၍တွေ့နိုင်သလော။ အနန ္တတန်ခိုးရှင်၏ ဇာတိကို အကုန်အစင်နားလည်နိုင်သလော။ မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုမှီသည်ဖြစ်၍ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ မရဏနိုင်ငံထက် နက်သည်ဖြစ်၍ သင်သည်အဘယ်သို့သိနိုင်သနည်း။ အတိုင်းအရှည်သည်မြေကြီးထက်လွန်၍ သမုဒ္ဒရာထက်သာ၍ကျယ်ဝန်းလျက်ရှိ၏” (ယောဘ၊ ၁၁း၇-၉)
တစ်ရံရောအခါ၊ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် မယုံကြည်သူဘုရားမဲ့ဝါဒီပညာရှင်တစ်ဦးတို့သည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်ကြ၍ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီယိုင်းပင်းကာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်။ တစ်နေ့သ၌ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေက မိမိအိမ်၌ရှိသောစာကြည့်ခန်းထဲတွင်စကြာဝဠာအတွင်း ဂြိုလ်ကြီးကိုးလုံး၏ လည်ပတ်ပုံကို ပုံစံငယ်ထုတ်ထားသည့်အတိုင်း ပုံဖော်၍ မော်တာကိုအသုံးပြုကာ၊ စကြာဝဠာအတွင်းဂြိုလ်ကြီးလုံးတို့၏ ဂြိုလ်ပတ်လမ်းကြောင်းအသီးသီးတို့၌ လည်ပတ်ပုံကိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လေသည်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေကို ညစာမိတ်ဆုံစားပွဲလာရောက်ဖို့ ရက်ချိန်ပေးပြီး ဘိတ်ကြားထားပါသည်။ အချိန်တန်သည်ရှိသော်၊ မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေရောက်လာပြီး၊ ပြင်ဆင်ထားသောညစာစားပွဲကို နှစ်ဦးသားမြိန်ရည်၊ လျှက်ရည်ဖြင့်သုံးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ စားပြီးသည့်အခါတွင် ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေက၊ သူ့ရဲ့မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေ၏ လက်ကိုကိုင်ဆွဲလျက်မိမိ၏စာကြည့်ခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါတော့သည်။ မယုံကြည့်သူမိတ်ဆွေသည် ၎င်းစာကြည့်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်နှင့် မမျှော်လင့်ဘဲ စကြာဝဠာပုံစံငယ်လေးကို သက်ဝင်လှူပ်ရှားသည့်အလားမြင်လိုက်ရသည်နှင့် ခဏတာမျှကြည့်ရှူပြီး သူရဲ့ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေဘက်သို့လှည့်၌ မေးလိုက်သည်။ ဒါဘယ်ကရလာတာလဲ။ တော်တော့ကိုပီပြင်တာဘဲ။ ဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေကလည်း အေးအေးဆေးဆေးဘဲပြန်ဖြေပါတယ်။ “ဘယ်သူမှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ သူ့ဟာသူဖြစ်လာတာပါ”။ ဒီအဖြေက်ု မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေက မကျေနပ်သည့်အတွက် ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေဘက်သို့ လှည့်ပြီးပြောသည်မှာ “ဒီမှာ၊ မင်းငါ့ကိုအရူးအောက်မေ့လို့လား၊ ဒီဂြိုလ်ကိုးလုံးပုံစံငယ်လေးတွေ သူ့ဟာသူဖြစ်လာတယ်လို့၊ ငါယုံမယ်များ မင်းထင်သလား”။ အဒီအခါမှာ ခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေက မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေ၏ခါးကိုပွေ့ဖက်ပြီး ပြူံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်မှာ “ဒါပေါ့မိတ်ဆွေ၊ ဒီပုံစံငယ်ပင်လျှင် သူ့ဟာသူမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင် အဆမတန်ထုကြီး မားပျယ်ဝန်းလှတဲ့ဲဂြိုလ်ကြီးများဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သူ့ဟာသူ့ဖစ်လာနိုင်တော့မှာလဲဗျာ”။ မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေက ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နှင့် “ဟုတ်ပေသားဘဲကိုး” ဟုပြောရင်း နှုတ်ဆက်ကာ အိမ်သို့ပြန်လေ၏။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၇ ။
၂၇။ စာရေးဆရာဆန်းလွင်ရေးသားသော ရတနာသုံးပါးကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လာသူတစ်ယောက်အကြောင်းမှ ခရစ်ယာန်ဝါဒ၏ ကောက်နှုတ်ချက်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂၇) အဖြ။
စာရေးဆရာဆန်းလွင်၏ ခရစ်ယာန်ဝါဒကောက်နှုတ်ချက်စာအုပ်ကို မဖတ်ဘူးသေးပါ။ လိုက်ရှာပြီး ဖတ်ဦးမည်။ တစ်စုံတစ်ရာသောအတိုင်းတာတစ်ခုဖြစ်သည့်အဖြေကိုတော့ရှိနိုင်ကောင်းသည်။
မေးခွန်နံပါတ် ၂၈ ။
ဆိုးမိုက်၍ မလိမ္မာသောလူယုတ်မာများကို အဘယ်ကြောင့်ဖန်ဆင်းထားပါသနည်း။ သူ့ဟာသူဆိုးမိုက်လာရသည်ဆိုပါက အနန ္တတန်ခိုးတော်ဖြင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် သူဖန်ဆင်းသောလူတွေကိုသူမထိန်းသိမ်းနိုင်သနည်း။ ထာဝရဘုရား၏ တန်ခိုးတော်ကမည်သို့ နည်း။
မေးခွန်းနံပါတ် (၂၈) အဖြေ။
လူသားတို့အား ဖန်ဆင်ရှင်မှပေးသောကြီးမြတ်သည့်ဆုမှာ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပေသည်။ “အသက်ရှင်ခြင်း၊ သေခြင်း၊ ကောင်းကြီးပေးခြင်း၊ ကျိန်ခြင်းတို့ကို သင့်ရှေ့မှာငါထားသည်ဟု သင့်တဘက်၌ ကောင်းကင်မြေကြီးကို ငါတိုင်တည်၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်နှင့်သင်၏အမျိုးအနွယ်သည်အသက်ရှင်မည်အကြောင်းနှင့်၎င်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုချစ်၍ စကားတော်ကိုနားထောင်သဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းအကျိုး၊ သက်တာရှည် ခြင်းအကျိုးကို ပေးတော်မူသောကိုယ်တော်ကိုဆည်းကပ် မှီဝဲမည့်အကြောင်းနှင့် ထာဝရဘုရားသည် သင်၏ ဘိုးဘေးအာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်၌ နေမည်အကြောင်းနှင့် ယှဉ်သောအသက်တရားကို ရွေးယူလော့ဟု ဣသရေလအမျိုးအား ဟောပြော၏” (တရား၊ ၃၀း၁၉-၂၀)။
အပြစ်သည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှလာသည်မဟုတ်။ လူသားတို့က စတင်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် အဘိုးအခပေးပြီး ဖြေဆေးကိုပေးတော်မူ၏။ ယေရှူ၊က၊ “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ” (ယော၊ ၁၄း၆)။
သမ္မာကျမ်းစာက “လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင့် စိတ်မပူနှင့်။ မဆရားသဖြင့် ပြုသောသူတို့ကိုမငြူစူနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် မကြာမမြင့်မှီ မြက်ပင်ကဲ့သို့ရိတ်ခြင်းကိုခံရ၍ စိမ်းသောပျိုးပင်ညှိုးနွမ်းသကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်” (ဆာ၊ ၃ရး၁။ သု၊ ၂၄း၁၉-၂၀)။
သင်သည်ဆိုးသွမ်းသောသူများအတွက် စိတ်သောကရောက်နေသည်ထက် မိမိကိုယ်မိမိပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက ပို၍အရေးကြီးလှပေသည်။ (၁ယော၊၁း၈)တွင် ကိုယ်အပြစ်မရှိဟု ငါတို့သည်ဆိုလျှင် ကိုယ်ကိုကိုယ်လှည့်ဖြားကြ၏။ ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိ” ။ အကြောင်းမူကား၊ “ပညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကို စောက်ရှောက်သည်တွင် တစ်စုံတစ်ခု၌ မှားမိလျှင် ပညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကို လွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏” (ယာ၊ ၂း၁၀)။ “သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရဟု ပညတ်ထားသည်တွင် ကိလေသာစိတ်ဖြင့် သူ့မယားကိုကြည့်သောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူဖြစ်ကြောင်း ယေရှူခရစ်တော်က မိန့်တော်မူသည် (မ၊ ၅း၂၇)။ အပြစ်နှင့်မကင်းသောကျွန်ုပ်တို့လောကသားများအတွက် ခရစ်တော်သည် “ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီ” (၁ပေ၊ ၂း၂၄)။
အိုမိတ်ဆွေ၊ သခင်ယေရှူသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ကျွနု်ပ်တို့တစ်တွေ ယုံကြည်ကိုးစားကြမည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း ကျွနု်ပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ပင့်ဖိတ်ပူဇော်လိုက်မည်ဆိုလျှင် ကျွုနု်ပ်တို့၏ အသက်တာတစ်ခုလုံးသည် ကိုယ်တော်ရှင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ အစဉ်တစ်စိုက်တိုးတက်ကြီးပွားလာမည်ဖြစ် ပြီး ကိုယ်ကာယသည် အပြစ်ကြောင့်အသေဖြစ်သော်လည်းဝိညာဉ်မူကား ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့် အသက်ရှင်ခြင်း အခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။ မိတ်ဆွေခင်ဗျား၊ သခင် ယေရှူသည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ် ကြောင်းကို သင်ယုံပြီလား၊ သို့မဟုတ် “သူဟာဘယ်သူလဲ” ဟူ၍ ဒွိဟဖြစ်လျက် တွေဝေနေဆဲဘဲလား။ သင်ဒီလိုတွေ ဝေမည့်အစားတမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကဲ့သို့ “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်” ဟု ( မ၊၁၆း၁၆) အပိုင်ပြောနိုင်သည့်နည်းတူ သင်လည်းထိုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်လေ့လာဖွေရှာလှည့်ပါ။
မေတ္တာတော်ရှင်သည် သင်၏ပိတ်ထားသောစိတ်နှလုံးတံခါးဝ၌ရပ်လျက်၊ တံခါးခေါက်တော်မူ၏။
ခရစ်တော်ဘုရားက၊ “ငါသည်တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကိုကြား၍ တံခါး ကိုဖွင့်အံ့။ ထိုသူရှိရာသို့ ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူစားသောက်မည်။ သူသည်လည်း ငါနှင့်အတူစားသောက်ရလိမ့်မည်။ (ဗျာ၊ ၃း၂၀)။
သင်၏စိတ်နှလုံးတံခါးကို ယခင်ကဲ့သိုပ ပိတ်မြဲတိုင်း ပိတ်မထားဘဲ၊ ယခုအချိန်မှစ၍ သခင်ယေရှူခရစ်အားကြိုဆို လက်ခံပါတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါစို့လား။
၃၁၇။ ခရစ်ယာန်များသည် လောကီပျော်ရွှင်မူများ၌ ပါဝင်သင့်သည်ဟု သင်ထင်မြင်ယူဆပါသလား။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်က “အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ပြုသင့်သော်လည်း အရာခပ်သိမ်းတို့သည် တည်ဆောက်ခြင်းမပေးပါ”။ “အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ပြုသင့်သော်လည်း အရာခပ်သိမ်းတို့သည် မသင့်တော်”ဟုပြောပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့ခရစ်ယာန်များနှင့် လောကကြီး အပေါ်၌ တာဝန်ရှိပါသည်။ လူတစ်ယောက်သည်မိမိ၏လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်သြတပ္ပစိတ်ကြည်လင်သော် လည်းအခြားသောညီအကို အတွက် ထိမိ၍လဲစရာဖြစ်ပါကအပြစ်ဖြစ်လာသည်။၁ကော(၈)ကိုသေချာစွာဖတ်ပါက အဖြေကိုသင်တွေ့မည်ဟု ကျွနု်ပ်ထင်ပါသည်။ ညီအကိုအတွက်ထိခိုက်စရာဖြစ်စေသောအရာကိုပြုလုပ်ခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်ပေါလုပြောပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၌လွှတ်လပ် မူရှိ သော်လည်းပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ပျော်ရွှင်မူများသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဟုသင်ယူဆပါက အဖြေမှာ မလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရာများကို ခရစ်ယာန်များရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
၃၁၈။ ဖဲကစားခြင်းသည်မှားသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ကျွနု်ပ်တို့သည်လောင်းကစားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အပန်းဖြေခြင်းအဖြစ်သာ ကစားကြပါသည်။
အမှားမဟုတ်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ယူဆရသည့်များစွာသောအရာတို့သည် အားနည်းသောခရစ်ယာန်အချို့အတွက်ထိမိ၍လဲစရာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများကို ရှင်ပေါလုက ၁ကော၊၈း၁၃ တွင် ပေးပါသည်။ခရစ်ယာန်အများစု၏စိတ်ထဲတွင် ဖဲကစားခြင်းသည် လောင်းကစားမူနှင့်လောကီအရာနှင့် တွဲဘက်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုနေရာသို့ သင့်ကိုမပို့ဆောင်သော်လည်း ၁သက်၊၅း၂၂ တွင် “မကောင်းသောအမူအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုရှောင်ကြဉ်ကြလော့” ဟုဆို၏။ ဤကိစ္စအတွက် သင်ဆုတောင်းပါကမည် သို့ပြု ရမည်ကို ဘုရားသခင် ဖွင့်ပြမည်ဟု ကျွနု်ပ်စိတ်ချပါသည်။
၃၁၉။ ခရစ်ယာန်များသည် အားကစားပွဲများကို ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ကစားခြင်းပြုလုပ်သင့်သည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၌ပျော်ရွှင်ခြင်း၊အပန်းဖြေခြင်းရှိသင့်သည်ဟုကျွနု်ပ်ယုံကြည်ပါသည်။ လူတစ်ယောက်စီသည် ဘုရားသခင် ၏ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်ပါသလား။ သူ့ကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်၏ ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါသလား ဟူ၍သူ့ကိုယ်သူစီရင်သင့်သည်။ “လူတိုင်း မိမိ သဘောကျသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ” ဟု ရှင်ပေါလုကပြောပါသည်။
၃၂၀။ လောင်းကစားရာ၌ ခရစ်ယာန်များပါဝင်သင့်ပါသလား။
လောင်းကစားခြင်းသည် သမ္မာကျမ်း၏သွန်သင်ချက်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက် ပြုပါသည်။အနန္တတန်ခိုးရှင်ထာဝရဘုရား၏ အကြံ အစည်တော်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ အခွင့်အရေးနှင့်ကံကြမ္မာအပေါ်၌ အမှီပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီး သမာအာဇီဝရှိစွာကျင့်ကြံလုပ်ကိုင်နေထိုင်စေလိုပါသည်။ထို့အပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ လောင်းကစားခြင်းကို ကန့်ကွက် တားမြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစွာတွေ့ရှိရပါသည်။
၃၀၉။ ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများသည် မော်ဒယ်အဝတ်အစားအတိုင်းဆင်ယင်အလှပြင်ရမည်လော။
ခရစ်ယာန်များသည် လောကိပုံစံ၊ဝတ်စားဆင်ယင်မူတို့ကိုမလိုက်နာရန်သမ္မာကျမ်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်၍ မှန်ကန်၊ပီပြင်စွာဝတ်ဆင်ရန်အခွင့်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် လက်သည်းဆိုး ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးမျက်ရစ်ဆွဲခြင်းတို့ကို မုန်းသော်လည်း မျက်နှာ၌မိတ်ကပ်ပါးပါးလေးအလှခြယ်ခြင်းသည် ကောင်းာည်ဟု မြင်သည်။
၃၁၀။ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းထဲ၌မိန်းမများများယူခြင်းကိုခွင့်ပြုပါသလား။ အာဗြဟံ၊ဒါဝိဒ်နှင့်ရှောလမုန်တို့သည် မိန်းမတစ်ယောက် ထက်ပို၍ယူကြသည်။ဤအရာကို ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုဟန်တူပါသည်။
ထိုအရာများကို ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုသော်လည်း ဘုရားသခင်ထောက်ခံသည် သို့မဟုတ်အားပေးသည် သို့မဟုတ်ကောင်းချီးပေး သည်ဟူသော ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ်မျှမရှိပါ။ သူ၏နဂိုမူလ ဖန်ဆင်းခြင်းသည် ယောကျ်ားတစ်ယောက်၊မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်း ၌တွေ့ရသည့်အတိုင်း မိန်းမများများယူခြင်း၏ဝမ်းနည်းစရာနောက်ဆက်တွဲတို့က မိန်းမများများယူခြင်း၏မကောင်းမူ အပေါ်ဘုရား သခင် ၏စီရင်ချက်ဖြစ်သည်။ ၃ရာ။၁၁ ကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
၃၁၁။ ရှည်သောဆံပင်များသည် မည်သို့အနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများဆံပင်ဖြတ်ရန်အဘယ့်ကြောင့်တားမြစ်ခြင်းခံကြရပါသနည်း။
လင်မယားတော်စပ်မူပုံစံမှာ အသင်းတော်သည် ခရစ်တော်၏သတိုးသမီးအနေနှင့် ဆက်ဆံခြင်းပုံစံဖြစ်သည်(ဧဖက်။၅)။ အသင်း တော်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်ခံခြင်းအနေဖြင့် မိန်းမသည်သူ၏ယောကျ်ားကိုနာခံရမည်။ ဆံပင် သည် အမျိုးသမီး၏ဘုန်းအသရေဖြစ်သည်နှင့်အညီ(၁ကော၊၁၁၁၅) ရှည်သောဆံပင်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ် နာခံကြောင်း သက် သေဖြစ်သည်။
၃၁၂။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် ဘုရားကျောင်းထဲ၌ ဦးထုပ်ကိုဆောင်းသင့်ပါသလား။
၁ကော၊၁၁ ရှိဦးခေါင်းအုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးထုပ်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီး၏ဘုန်းအသရေဖြစ်သော ဆံပင်နှင့်ဆိုင်သည်ဟု ခိုင်လုံစွာ ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကောရိန ္တုသြဝါဒစာထဲရှိ ထိုကျမ်းပိုဒ်မှာသခင်ဘုရား၏စားပွဲကို ပြောခြင်းဖြစ်၍ ၎င်းကိုလည်း စဉ်း စားရမည်။
အသင်တော်သည်သမ္မာကျမ်းနည်းအတိုင်း စုဝေးကြသောအခါ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏နေရာမှာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကို အရာသုံးခုတားမြစ်ထားပါသည်။ပထမအရာမှာမေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ၏အလုပ် လုပ်ခြင်းကို မနှောင့်ယှက်ရန် ဖြစ်သည်(၁ကော၊၁၄း၂၃-၃၅)။ဒုတိယအနေနှင့်သွန်သင်သြဝါဒပေးခြင်းတို့၌ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် တမန်တော်တပါးကဲ့သို့သြဝါဒပေးဆုံးမခြင်းကိုမပြုရ။ တတိယအနေနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အသင်းတော်ထဲတွင်အာဏာ ရှိသော နေရာ၌မထားရ။ အာဏာရှိသောနေရာသည် အမျိုးသားများကိုပေးသည်။ ဤအရာသည် အမျိုးသမီးအပေါ်၌ အထင်အမြင် သေးခြင်း မဟုတ်ပါ။မှန်ကန်သောနေရာကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပို၍မြင့်မြတ်သည်ပို၍နိမ့်ကျသည်ဟူ၍ မဆိုလိုပါ။ သူ့နေရာနှင့်သူ ဖြစ်သည်။ အထက်ပါတားမြစ်ချက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ ကျမ်းစာသင်တန်း၌ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သွန်သင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မသက် ဆိုင်ပါ။အကြောင်းမှာထိုအတန်းသည်အသင်းတော်၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မဟုတ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
၃၁၄။ အသင်းတော်ထဲ၌အမျိုးသမီးများ စကားပြောသင့်ပါသလား။
သားများအပေါ်သြဝါဒပေးခြင်းမပြုရန်တားမြစ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ဆိုလိုသောအရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် အမျိုးသားအပေါ်၌ အုပ်စိုး ခြင်းမပြုရ။ အခွင့်အာဏာမရှိရ။အကြောင်းမှာ ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ယောကျ်ားသည်မိန်းမ ၏ဦးခေါင်းဖြစ် သည်။ သွန်သင်ခြင်းဆုကျေးဇူးရရှိသော အမျိုးသမီးက သူ၏ဆုကျေးဇူးအစွမ်းသတ္တိကိုအသင်းတော်ရှိ အမျုးိသမီးများကို သွန်သင်ခြင်းသည် မမှားဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လူထုရှေ့၌ ဆုတောင်းခြင်း၊သက်သေခံခြင်းခွင့်ပြုသော်လည်း လင်ယောကျ်ား၏ဦးဆောင်ညွှန်းကြားမူကို အမြဲတမ်းနာခံရမည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍မှတ်သားထားပါ။
၃၁၅။ မင်္ဂလာလက်စွပ်နှင့်အခြားရွှေ၊ငွေရတနာဆင်ယင်ခြင်းကို သမ္မာကျမ်းကတားမြစ်ပါသလား။
လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ခြင်း တားမြစ်သည့်အရာကို သမ္မာကျမ်း၌ ကျွနု်ပ်မတွေ့ပါ။ဖခင်ကသူ၏ပျောက်သောသားပြန်လာသောအခါ လက် စွပ်စွပ်ပေးသည်။တဖက်စွန်းရောက်ပြီး လွန်ကဲသောဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းမျိုးကိုမပြုရန် သမ္မာကျမ်းကသွန်သင်သည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည် ပါ သည်။ ၁ပေ၊၃း၃ ကရွှေ၊ငွေ၊ရတနာဝတ်ဆင်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟု ယူဆရပါမည်။ ပေတရုသည် ရွှေတန်ဆာကိုဆင်ယင်ခြင်းအားသတိ ပေးပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်အဝတ်အစားအမျုးိမျိုးဝတ်ဆင်ခြင်းကိုလည်းသတိပေးသည်။ အဝတ်အစားများမဝတ်ရန်ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်ဝတ်စားဆင်ယင်မူထဲသို့သာမရောက်ဘဲ တဖက်စွန်းမရောက်ရန် ပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၃၁၆။ ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည် မယုံကြည်သော လင်ယောကျ်ား၏စကားကို နာခံရမည်လား။
သင်မေးသောမေးခွန်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြေရန်ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။တစ်ဦးချင်း၏အမူကိစ္စသည်တစ်ဦးချင်းနှင့်ဆိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်ယာန်များအားမယုံကြည်သူများနှင့်အိမ်ထောင်မပြုရန်ကြပ်တည်းစွာတားမြစ်ထားသောကြောင့် မယုံကြည် သောသူနှင့်အိမ်ထောင်မပြုသင့်ပါ။ သို့သော်လည်း အများသောသူတို့က မယုံကြည်သူနှင့်စုဖက်သောကြောင့် ၁ကော၊၇ အရ ခရစ်ယာန်အ မျိုးသမီးသည် မယုံကြည်သော လင်ယောကျ်ားနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းခင်ပွန်း၏စကား ကိုနား ထောင်ပြီးနောက်ဆုံး၌ထိုသူက သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံစေရန် ပုံသက်သေပြရမည်။ဘုရားသခင်၏စကားနားထောင်ခြင်းကို မင်းအာ ဏာစက်ယောကျ်ား၊မိန်းမတို့၏စကားနားထောင်ခြင်း ထက်ဦးစွာအရင်လာရမည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ၏စကားကို နားထောင်သည်ထက် ဘုရားသခင်၏စကားကိုနားထောင်သင့်သည်။”မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လင်ယောကျ်ား၏စကားကိုမိန်းမကနားထောင်ရမည်မှာ နှုတ်ကပတ်တော် သွန် သင်ချက်ဖြစ်၍ ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိ။သူမ၏ပုံသက်သေအားဖြင့် လင်ယောကျ်ားအား သခင်ယေရှုထံပို့ဆောင်ရန် ကိုယ်တော်၏စကားကို ကြိုးစားနာခံရမည်။
Myanmar Grace Ministry.
၂၈၁။ သားရဲ၏တံဆိပ်ကို မည်သည့်အချိန်၌ပေးမည်နည်း။
သားရဲ၏တံဆိပ်ကို အသင်းတော်ချီဆောင်ပြီးနောက်မှ ပေးမည်။သားရဲ၏တံဆိပ်ကိုရသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်၏ရန်သူနှင့်သစ္စာခံခြင်းအနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် တံဆိပ်ကိုတစ်ဦးစီ အားပေးမည်။ထိုတံဆိပ်သည်မည်သည့်တံဆိပ်ဖြစ်မည်ကို ကျွနု်ပ်တို့မသိပါ။ သားရဲသည်အသင်းတော်ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ( ၂သက်၊၂ )။
၂၈၂။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ သမ္မာကျမ်းထဲတွင် ရေးသားခြင်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
များစွာသောအရာတို့သည် ပရောဖက်ပြုခြင်း၌ ရှင်းလင်းပါသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပတ် သက်၍ခြားနားသောအမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ရေးသားသောအရာ၏ဆိုလိုရင်းကို ကျော်လွန်ပြီးအနက် ပြန်ခြင်းမပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ် ပါသည်။သို့သော် သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးသားတော်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်လျက်စောင့်နေပါ။ယောလ၊၃း၁ ၌ဖော်ပြထားသည့်နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့စစ်ပွဲကြီးထဲတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်လူမျိုးတကာ အလယ်၌ ပါဝင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်။
၂၈၃။ သားရဲနံပါတ် ၆၆၆ ၏ ဆိုလိုရင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်သည် မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။
သားရဲနံပါတ် ၆၆၆ ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ (၆)သည်လူ၏နံပါတ်ဖြစ်ပြီး ပြည့်စုံခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤခြောက်သုံးလုံးသည် စူပါမင်း၏နံပါတ်ဖြစ်ပြီး အန ္တခရစ်ဖြစ်မည်မှာ သံသယမရှိပေ။
၂၈၄။ ဒန်အမျိုးကို ၁၄၄၀၀၀ ထဲမှ အဘယ့်ကြောင့်ချန်ထားရပါသနည်း။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄၉း၁၇ ၌ရှိသော ယာကုပ်၏ပရောဖက်ပြုချက်အရ ဒုစရိုက်လူအနိ ္တခရစ်သည် ဒန်အမျိုးထဲမှပေါ်လာပြီးသူသည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်မည်ဟု ထင်ရှားစွာ ပြောပြပါသည်။ဤအကြောင်းကြောင့် ဒန်ကိုချန်ထားပြီးအခြားအမျိုးကိုအစားထိုးပါသည်။ ဧဖရိမ်ကို ဖော်ပြမထားဘဲ ယောသပ်ကို အစားထိုးရခြင်းမှာ ဧဖရိမ်သည်မြောက်ပိုင်းအမျိုး(၁၀)မျိုး၏ နာမည်ဖြစ်လာသောကြောင့်တည်း။
၂၈၅။ ဇာတိခရစ်ယာန်များသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းရမည်လား။
၁သက်၊၄ အရ ချီဆောင်ခြင်းတွင် ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူအားလုံးတို့သည် ခေါ်သွားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှု သည်“ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်မီကဲ့သို့ လူသားသည် ကြွလာသောနေ့၌ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟူသောဖော်ပြချက်ကို သာမက သောဒုံနှင့်ဂေါမောရ နေ့ရက်များဟုလည်း ပြောပါသည်။နောဧသည်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ဖြစ်သည့်ဘေးဒဏ်ကြီးပုံစံမတိုင်မီ ကယ်တင်ခြင်းရသည်သာမဟုတ်ဘဲ ယေရှုပြောသည့်အတိုင်း ဘေးဒဏ်ကြီး၏အခြားသောပုံစံဖြစ်သည့်သောဒုံပျက်စီးခြင်း၌လည်း လောတကို ရွေးနှုတ်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ် စေ ဇာတိခရစ်ယာန်တို့သည် ခရစ်တော်ကို တရားပလ္လင်၌ဆုံးရှုံးခြင်းခံစားကြမည် (၁ကော၊၃း၁၁-၁၅)။
သင်သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်မီဖြစ်ရမည့်ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအပြီး ခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွ လာ သောအခါ၌ မကောင်းသောသူများကိုတရားစီရင်ရန် ကြွလာမည်။ ဤအချိန်တွင် လူတကာရှေ့၌ပေါ်လာပြီးလူတိုင်းသည်သူ့ကို ဖူးမြင်ရကြမည။်
အနိ ္တခရစ်သည် ဒန်အမျိုးမှထွက်လာမည့် ဂျူးလူမျုးိတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဗျာဒိတ် ၁၇ နှင့် ၁၈ရှိနီမောင်းသောအဝတ်ကိုဝတ်သောအမျိုးသမီးနှင့်သူမ၏ တိတ်တိတ်ပုန်း အသိုက်အမြုံဆိုလိုရင်းမှာ အယူလွဲသူများဖြစ်သည်။
၂၈၈။ “ ဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာ ” သည်အဘယ်နည်း။
ဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာသည် စာတန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီး သူသည် ယနေ့ပုန်းနေသော်လည်း အသင်းတော်ကိုချီဆောင်ခြင်း နောက် ပိုင်းတွင်လူတစ်ယောက်၏အထဲ၌ လူဝင်စားပြီး အနိ ္တခရစ်သို့မဟုတ် ဒုစရိုက်လူဟုခေါ်မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် သူ့ကို “အလုပ်လုပ်နှင့် နေသောဆိုးညစ်ခြင်း၏နက်နဲရာ ” ဟုခေါ်သည်(၂သက်၊၃)။
၂၈၉။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်း၌ ဘာသာရေး၌မည်သူဦးဆောင်သူဖြစ်မည်နည်း။
ချီဆောင်ခြင်းနောက်ပိုင်းအသင်းတော်အားလုံးတွင် ဒုတိယမွေးခြင်းခံသောသူတစ်ယောက်မျှ မပါဘဲချန်ထားခြင်းခံရသောသူများ သာဖြစ်သည်။ အသင်းတော်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအဖွဲ့ချုပ် သမဂ္ဂအဖြစ် စည်းလုံးကြကာ ထိုနေရာ၌ ရိုမင်ကာသိုလိပ်အသင်းတော်သည် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်(ဗျာ၊၁၇ နှင့် ၁၈)။
၂၉၀။ ခရစ်တော်ကြွမလာမီ ဂျူးလူမျိုးများသည် ယေရုရှလင်သို့ပြန်လာကြမည်လား။
ယေရှုခရစ်တော်၏ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ ကာလပတ်လုံး ဂျူးတို့သည်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြည့်စုံစွာပြန်လာကြမည်ဟု ကျွန်ုပ်မ ယုံကြည်ပါ။ သူတို့ကို နည်းနှစ်နည်းဖြင့် ပြန်လာစေမည်ဖြစ်သည်။မိခင်နိုင်ငံတော်ကိုတမ်းသခြင်းဖြင့် (ဂျူးထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ပါလက်စတိုင်းသို့လက်ရှိပြောင်းရွှေ့လာခြင်း) နှင့်မိစ္ဆာခရစ်၏မှားယွင်းသော တုန့်ပြန်ချိန်တွင် ပြည့်စုံစွာပြန်လာကြမည်ဖြစ်သည်။
၂၉၁။ ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီ သို့မဟုတ် အပြီတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်အချိန်ရှိမည်လား။
ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်မီနှင့် အပြီးကာလတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သခင်ဘုရားကြွမလာမီ ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ကာလအကြောင်းကိုကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး၌ ကျွနု်ပ်မတွေ့ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ချီဆောင်ခြင်းအပြီးဗျာဒိတ် ၆ တွင်ဖြူသောမင်း အားဖြင့် ကိုယ်စားပြုသော အနှစ်တစ်ထောင်အတုကိုအ နိ ္တခရစ်ယူလာသောအချိန် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော ကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုရှိမည်။ ထို့သို့သော အချိန်နှင့်ပတ်သက်၍ တိကျသောအဆိုမရှိပါ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တို့သည် နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်များတွင် ဘေးအန ္တရာယ်များပြီးဆိုးယုတ်သော ကာလဖြစ်မည်ဟု ရှင်းရှင်လင်းလင်းပြောဆိုကြသည်(မဿဲ ၊၂၄နှင့် ၁တိနှင့် ၂တိ)။
၂၉၂။ ချီဆောင်ခြင်းပြီးမှ ကယ်တင်ခြင်းရသော ဂျူး ၁၄၄၀၀၀ တို့သည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် အသတ်ခံကြမည်ဟု တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါသည်။မှန်ပါသလား။
ဂျူး၁၄၄၀၀၀ တို့အသတ်ခံရမည်ဟု သွန်သင်သောသူရှိသည်မှာ ကျွနု်ပ်အံ့သြပါသည်။သူတို့သည် နောဧပုံစံမျိုးကိုယ်စားပြု သည့်အကန်အကြွင်းများဖြစ်ကြပြီး ဘေးဒဏ်ကြီးကာလကို ကျော်ဖြတ်သွားကြမည်ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားကထူးဆန်းစွာ စောင့်ထိန်းကာ ကွယ်ပေးမည်။ ဗျာဒိတ် ၇နှင့်၁၄ တို့ကို သေချာစွာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းစေပါသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် တပါးအမျိုးသား ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် သူတို့၏အသက်ကို ပေးလှူကြမည်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြည့်စုံစေသည်။(အထူးသဖြင့် ဗျာဒိတ် ၂၀ ကိုကြည့်ပါ။) ၁၄၄၀၀၀ ဂျူးလူမျိုးတို့သည် အသတ်ခံရမည်ဟု ကျွနု်ပ်မယုံကြည်သော်လည်း သမ္မာတရားအတွက် ဘုရားသခင်၏ကြီး မြတ်သောကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ရန် အနှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ဝင်ကြမည်။
၂၉၃။ ခရစ်တော်၏အသင်းတော်ကို ချီဆောင်သောအခါ ကလေးများဘာဖြစ်ကြမည်နည်း။
ကယ်တင်ခြင်းရသောသူများ အားလုံးတို့ချီဆောင်ခြင်း ခံရမည်။တစ်ယောက်ကိုမျှ ချန်းထားရမည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်သည်နှင့်အညီ မပိုင်းခြားတတ် သေးသောအရွယ်၌ရှိသည့် ကလေးအားလုံးလည်း ချီဆောင်ခြင်းခံရကြမည်။ကယ်တင်ခြင်းမရသည့်လူများ ခရစ်တော်ကိုငြင်း ပယ်ကြသောကြောင့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးကြမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ယုံကြည်သည်။ကလေးများသည် ခရစ်တော်ကိုမငြင်းပယ်သောကြောင့် သူတို့အား လုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ကလေးများဒဏ်ပေးခံရခြင်းကိုသမ္မာကျမ်းထဲ၌ မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့် ကလေးများအားလုံး ချီ ဆောင်ခြင်းခံရမည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည်ပါသည်။
၂၉၄။ အနုမြူဗုံးကို မည်သည့်အချိန်တွင်အသုးံပြုပါမည်နည်း။
ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းတွင် အနုမြူဗုံးပေါက်ကွဲမည်ဟု ကျွနု်ပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ၂ပေ ၌ရှင်ပေတရု ကြိုတင်ဟောပြေသည့် အတိုင်း နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းသည်အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအပြီးတွင် ရောက်ရှိလာပါမည်။
၂၉၅။ ပါလက်စတိုင်းသို့ရုရှားများ ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ခြင်းသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်၌ဖြစ်ပါက ယေဇကျေလ-၃၉း၉-၁၀ သည် မည်သည့်အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါသနည်း။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလအတွင်း၌ ထိုလက်နက်များကိုမီးရှို့ကြမည်လော
ရုရှားသည် ပါလက်စတိုင်းသို့ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယေဇကေလ ၃၉ ရှိ တိုက်ပွဲအပြီး၌ ပျက်စီးသွားသော အရာများကို ရှင်းလင်းရန်(၇)နှစ်ကြာမည်ဟူသောအဆိုတွင် ခက်ခဲသောအချက်အလက်များရှိနိုင်ပါသည်ရုရှား၏တိုက်ပွဲအပြီးတွင် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွါးမည်။ ထို့ကြောင့်ပျက်စီးသောစစ်လက်နက်များ၏အစုအပုံမှာ နှစ်ဆဖြစ်လာမည် အာမဂေဒုန်စစ်ပွဲသည် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအလယ်မှာဖြစ်မည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ကြောက်မက်ဘွယ်ရာတို့ကို မှတ်မိခြင်းရှိ မည်ဖြစ်ရာထိုသို့မဟုတ်ပါက ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် မည်သို့ကျေးဇုူးတင်နိုင်ကြပါမည်နည်း။
၂၉၆။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာများကိုရွှေးနှုတ်ခြင်းသည် မည်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်မည်နည်း။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဒုတိယအကြိမ် သွန်းလောင်းခြင်း၊ဖန်ဆင်းသောအရာများ ရွှေးနှုတ်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဘေး ဒဏ်ကြီးကာလတစ်ဝက်ပြီး သွားသောအချိန်အတွင်း ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်က္ကသရေလလူမျိုးများအပေါ်သို့ သွန်းလောင်းကာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း(၇) အရ ၁၄၄၀၀၀သော သာသနာပြုများအားဖြင့် ပြောင်းလဲကြမည်။ဤသန့်ရှင်းသော ဝိညဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ဖန်ဆင်းသောအရာအားလုံးကို ထိခိုက်မည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏ ရလဒ်အဖြစ် ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးအနှစ်တစ်ထောင်ကာလအတွင်းတွင် တိရစ္ဆာန်နှင့်အသီးအနှံစသည့်ဖန်ဆင်းသောအရာအားလုံးတို့လည်း ကယ်တင်ရွှေးနှုတ်ခြင်းရကြမည်(ရောမ၊၈)။ ဤအရာသည် ဟေရှာယ၊၁၁း နှင့်၁၅အပါအဝင် ပရောဖက်ပြုချက်များစွာ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရလဒ်မှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုဖယ်ရှားသောအခါတွင် ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်း ခြင်းရောက်လာမည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဒုတိယအပိုင်းမှာ သုံးနှစ်ခွဲကြာမည်ဖြစ်သည်။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလပထမပိုင်းကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းရန်ဂတိတော်မတွေ့ရသော်လည်း မင်္ဂလာများကို ဖြစ်စေမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
၂၉၇။ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် ခုနှစ်နှစ်ကြာမည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့မည်သို့ နိဂုံးချုပ်မည်နည်း။
ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချိန်ကြာမူကို ပြသသည့်သမ္မာကျမ်းမှ အချက်ရှိပါသည်။ ပထမမှာဒံယေလ သီတင်း ခုနှစ်ဆယ်ထဲမှသီတင်းတစ်ပတ်သည်မပြည့်စုံသေးပါ။ ဤအရာတို့မှာ သီတင်းတစ်ပတ်သည်ခုနှစ်နှစ်ကြာကာ လဖြစ်သောကြောင့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလသည် ခုနှစ်နှစ်ကြာမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ဤဘေးဒဏ်ကြီးကာလကို နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားးပါ သည်။တစ်ပိုင်းစီသည်သုံးနှစ်ခွဲကြာပါသည်။ ဤနှစ်ခု၏အလယ်တွင် သားရဲ၏ရုပ်တုပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် သေခြင်းမှ အသစ်တဖန် အသက်ရှင်ပြန်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တို့အတွက် ယုံကြည်ခြင်း ဆိုင်ရာ အရေးကြီးဆုံးဖွင့်ပြမှုဖြစ်သည်။ သူသည်အမှန် တကယ် မေရှိယဖြစ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် လူ့ဇာတိ အဖြစ် ခံယူခဲ့ခြင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် လူတို့၏ သံသယစိတ်များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားလိုက်သည်။ Resurrection သည် ကိုယ်တော်သင်ကြားဟောပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ဧကန်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင် ရှားစေသည်။
အပြစ်တရားသေခြင်းလက်မှ လွတ်မြောက်မည် ဟူသော ကတိစကားသည် ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော ပုံသက်သေ ဖြစ်စေသည်။ ပရောဖက်များ၏ ဟောပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်။ မယုံကြည်သော နောက်လိုက်များ ကို ယုံကြည်လာစေသော ပထမဆုံးခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိ သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အားအင်ကုန် ခမ်းနေသော တပည့်တော်များအား ကြီးမားသည့် ကာယ အစွမ်းနှင့် ဝိညာဉ်စွမ်းအင်ကို ပေးလိုက်ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်များ သည် သံမဏိစိတ်ဓါတ်နှင့် အသက်စွန့်နိုင်သည့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြင့် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ဧဝဂေလိ သတင်းစကားကိုကြားပြောခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း တော်ကို ထင်ရှားစေခဲ့ကြသည်။
Resurrection သည် ကယ်တင်ခြင်းလက်ထဲတွင် ရှိ မည်လား
လူသည်ဘာကြောင့် သေရပါသနည်း။ သေခြင်း တရားသည် ဘာကြောင့် လူ့လောကအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာ ရပါ သနည်း။ ယနေ့ကျွနု်ပ်တို့အသက်ရှင်မှုသည် သေခြင်း တရား အတွင်း၌သာရှိနေပါသလား။ သေခြင်းတရားသည် လူ့လောက၏ နိဂုံးချုပ်ဖြစ်နေပါသလား။ လူသားများနေ့စဉ်နှင့် အမျှ ခံစားနေရသော သောကများ၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းများစ သည့် မတည်မြဲသည့် အနိစ္စတရားများ၊ သင်္ခါရတရားများ နှင့်သာ၊ အဆုံး မရှိစေသော သံသရာ၌ကျင်လည်နေရပါ မည်လား အစရှိသော မေးခွန်းများ၏ အဖြေကို မည်သူပေး နိုင်ပါမည်နည်း။ အမေးရှိလျှင် အဖြေရှိရပါမည်။ အထက်ပါ မေးခွန်းများကို အမှန်တကယ်အဖြေပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၊ လောကထဲတွင် လူသားအသွင်ဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့သည် သာ မက၊ သူကိုယ်တိုင် သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ကာ၊ ထိုသေ ခြင်းမှရှင်ပြန်ခြင်းအဖြစ် သို့အောင်မြင်စွာပြသခဲ့သူမှာ ယေရှု ခရစ်တော်ဘုရားပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသား အားလုံးခံစားနေရသော ဒုက္ခဝေဒနာ (အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း)တို့ကို အကြိမ်ကြိမ် ခံစားနေရမည့် ဤလောက သံသရာမှလွတ်မြောက်ရန် အမှန်ပင် ပယ်ချွတ်ပေးမည် ဖြစ် သည်။ တမန် ၂း၂၄- ]သေခြင်း ဝေဒနာသည် အစဉ် ချည်နှောင်ချုပ်ကိုင်၍ မဖြစ်နိုင်သည်နှင့် ထိုဝေဒနာကို ဘုရားသခင်သည် ချွတ်ပယ်၍ ထမြောက်စေတော်မူပြီ။
သေခြင်းတရားမရှိပါက ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း လည်း ဖြစ်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ရှင်ခြင်း တရားသည် သေခြင်းတရားမရှိမှီထဲက ရှိနေပါသည်။ ကျမ်း စာက ပြောပါသည်။ အပြစ်တရားကြောင့် သေခြင်းတရား လောကထဲသို့ ရောက်ရှိလာရပါသည်။ ဘာသာအသီးသီးက သေခြင်းတရားကို အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြသော်လည်း လူသား များ မငြင်းနိုင်သောအချက်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိသက်မဲ့ အားလုံးသည် အချိန်နှင့်အမျှသေဆုံးခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းမမြဲ သော သင်္ခါရတရားများဖြင့် အဆုံးသတ်နေကြပါသည်။ သို့ သော်လည်း သေခြင်းတရားသည် လူလောက၏ အဆုံးမဟုတ် ကြောင်း၊ သေခြင်း၏ တစ်ဘက်၌၊ နိစ္စထာဝရရှိနေသည်ကို ခရစ်တော် ဘုရား၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရား ွှ့န ွှမကအ့ Resurrection က စစ်မှန်သော ဘဝလမ်းမှန်သို့ ပို့ဆောင် ပေးနေပါသည်။ သင်သည် ယနေ့ပင် ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ပါက သင်၏ကိုယ်တွင်း၌ရှိနေသော သေခြင်းတရား သည် ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ခြင်းထဲသို့ ရောက်ရှိသွားကာ သင် ၏ ယခုကာလနှင့် အနာဂတ်ကာလအားလုံးသည် ပျက်စီးခြင်း နှင့် အစဉ်ကင်းသော ဘုရားသခင်၏ ထာဝရကာလထဲသို့ ဝင် ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရားသည် သင်၏ လက်ရှိဘဝကို နိဂုံးချုပ်လိုက်သော်လည်း ခရစ်တော်၏ သေ ခြင်းထဲသို့ရောက်ရှိသွားကာ သင်၏ယခု ကာလနှင့် အားလုံး သည် ပျက်ဆီးခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းသော ဘုရားသခင်ထာဝရ ကာလထဲသို့ဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရား သည် သင်၏လက်ရှိဘဝကိုနိဂုံးချုပ်ုလိုက်သော်လည်း၊ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့် ရှင်ခြင်းတရားက သင့်ကို ထိုနိဂုံးမှနေပြီး အဆုံးမရှိ၊ အိုခြင်းနာခြင်းဆင်းရဲခြင်း မရှိသော ထာဝရဘုရားထံသို့ရောက်ရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင် သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းလက်ထဲ၌ရှိ နေသူ ဖြစ် ပါမည်။
သင်သည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို အမှန်တကယ်ယုံပါ မည်လော …
ဘုရားသခင်သည် သေနေသောသူတို့၏ ဘုရားမဟုတ်။
အသက်ရှင်သော သူတို့၏ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏။ …Resurrection … ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ သေခြင်း ဆင်းရဲဒုက္ခသည် နိစ္စထာဝရ ဘုန်းအသရေသို့ ဝင်စားခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂ကော ၄း၁၈။
ကျမ်းဟောင်းတွင် ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ယေဇကျေ ၃ရး၅ ]သွေ့ခြောက်သော အရိုးတို့အား အသက်ကိုသွင်း၍ သင်တို့သည်အသက်ရှင် ရကြမည်။ ဟေရှာယ ၂၆-ကိုယ်တော်၏လူသေတို့သည် အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်၌နေသော သူတို့သည် နိုး ၍ သီချင်းဆိုကြလော့။ ဆာလံကျမ်းတွင် မေရှိယဆိုင်ရာ ကယ်တင်ခြင်းအုပ်မြစ်ကို အသက်ရှင်ပြန်ခြင်းတရားဖြင့် ဖွင့် ပြထားပါသည်။ ဆာလံ ၁၆း၁၀ ]ကိုယ်တော်သည် အကျွနု်ပ် တို့၏ ဝိညာဉ်ကို မရဏာနိုင်ငံ၌ ပစ်ထားတော်မမူ။ ကိုယ် တော်၏ သန့်ရှင်းသောသူအားလည်း ပုပ်စပ်ခြင်းရှိစေတော် မမူဘဲလျက် အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းသို့ပြညွန်တော်မူလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ရှေးမဆွကပင်လူသားတို့အား သင်္ချိုင်း တွင် ခရီးမဆုံးစေလိုပါ။ သေခြင်းမှ အစဉ်ကင်းလွတ်စေ လိုသော သဘောတော်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သေခြင်းတရား သည် ခရီးဆုံး မဟုတ်သကဲ့သို့၊ ပုပ်ပျက်သွားသော ဤကိုယ် ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်က ပြန်လည်သစ်လွင်စေပြီး၊ ထိုခန္ဓာထဲ မှနေ၍ ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မြင်ရမည်ကို ယောဘ ၁၉း၂၆ တွင် တွေ့ရပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သော သူနှင့် မဖြောင့် မတ်သောသူ အပေါင်းတို့သည် သေခြင်းအိပ်ပျော်ရမှနိုးထ၍ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်း အဆုံးအမကိုခံယူပြီးမှ တချို့တို့ သည် ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကို ဝင်စားပြီး၊ တချို့တို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်း ထာဝရအသရေပျက်ခြင်းတို့တွေ့ကြုံရမည် ဖြစ်သည်။ ဒံယေလ ၁၂း၂ ]မြေမှုန့်၌ အိပ်ပျော်သူများတို့ သည် နိုးကြလိမ့်မည်။ အချို့တို့ကား၊ ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်း နှင့် လည်းကောင်း၊ အချို့တို့သည် ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ထာ ဝရ အသရေပျက်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ နိုးကြလိမ့်မည်။
ကျမ်းသစ်သည် သေသောကိုယ်ခန္ဓာမှ ပြန်ရှင်လာ ခြင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ထုတ်ဖော်သွားပါသည်။ ရှင် လုကာ ရး၁၁-၁၇ တွင် ခရစ်တော်သည် မုဆိုးမ၏သား သေ၍ အလောင်းကို သင်္ဂြိုလ်ရန် ထုတ်သွားစဉ် အမိန့် တော်အားဖြင့် ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ မာကု-၅း၂၂-၂၄ တွင် ယာဣရု၏သမီးကိုလည်း သေခြင်းမှပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။ ဇဒ္ဒုကဲ တို့သည် Resurrection (သေခြင်းမှရှင်ပြန်ပြီး ထာဝရ အသက်ရှင်ခြင်း) ကို လက်မခံကြပါ။ သို့သော် သူတို့သည် Resurrection (မျော၍နေပြီး၊ သေဆုံးသွားပြီးနောက် အသက်ပြန်ဝင်လာကာ ထာဝရရှင်ခြင်းမရှိ) သေရွာပြန်များ ကို လက်ခံကြသည်။ အထက်ပါ မုဆိုးမ၏သားနှင့် ယာဣရု၏ သမီးတို့သည် Resurrection (သေဆုံးသွားသော်လည်း အသက်ရှင်ပြန်လာပြီးနောက် လူ့လောကထဲတွင်ပင် အသက် ရှင် နေထိုင်ပြီး၊ နောက်ဆုံး၌ သေဆုံးသွားကြသည်) သာ ရရှိကြပြီး၊ ခရစ်တော်ကဲ့သို့ Resurrection (သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ပြီး တဖန် မသေဆုံးခြင်း) ထာဝရအသက်ရှင်မရပါ။ ထို့ကြောင့် မာကု ၁၂း၁၈-၂၇ ခုနှစ်ယောက်သော ညီအစ်ကို နှင့် မိန်းမတစ်ဦးအကြောင်းကို ခရစ်တော်အားမေး၍ စုံစမ်း ခဲ့ရာ၊ ကိုယ်တော်က ]သေခြင်းမှ ပြန်ရှင်သောအခါ စုံဖက်ခြင်း မပြု၊ ထိမ်းမြားပေးစားခြင်း ကိုမပြု ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏ဟု မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ သေ၍ လေးရက်ရှိနေပြီဖြစ်သော လာဇရုကို ပြန်လည် အသက်ရှင်စေခဲ့ပြီး၊ ခရစ်တော် ကိုယ် တော်တိုင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ဆိုင်ပြီး၊ သူ့ကို ယုံကြည် သူတိုင်းသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်ရမည်ဟု အတိအလင်း မိန့်မှာခဲ့သည်။ ယော ၁၁း၂၅-၂၆ ယေရှုကလည်း ငါသည် ပြန်ရှင်ခြင်းအကြောင်း အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့် မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်၍ အသက်ရှင်သောသူရှိသမျှတို့သည် လည်း သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်။
အသက်ပြန်ဝင်ခြင်း (သေရွာပြန်ခြင်း)နှင့် အသက်ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း မတူညီကြပါ။
သေရာမှ ပြန်ရှင်လာသောအဖြစ်အပျက် အားလုံးကို ရှင် ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပါ။
ခရစ်တော်၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းResurrection အဖြစ်အပျက်သည် တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာ Miracal မဟုတ်ပါ။ တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာထက်ကြီးမြတ်သော ဘုရား သခင်၏လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ နောက် လိုက်မှန်လျှင် တန်ခိုးနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသာ ယုံကြည်နေ ရုံနှင့် မပြီးပါ။ ခရစ်တော်၏ တရားတော်များနှင့် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်မှသာ စစ်မှန်သော တပည့်တော် ဖြစ်လာပါမည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်နှင့် သူ၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် လက်ထက်က နောက်လိုက်အချို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို ကြည့်၍သာ ယုံကြည်သောကြောင့်၊ တကယ်တမ်းခရစ်တော် ကို ကားတိုင်တင်လိုက်သောအခါတွင်၊ ထိုသူများသည် ကွယ် ပျောက်သွားကြပါသည်။ ခရစ်တော်၏အလုပ်၊ ခရစ်တော် ၏ နှုတ်တော်ထွက်စကား၊ ခရစ်တော်၏အသက်ရှင်ခြင်းတို့ သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် အဆုံးသက်သွားသော် လည်း ထိုအရာအားလုံးသည် သင်၏နှလုံးထဲတွင်အစဉ်အမြဲ ရှင်သန်နေခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်သည် သင်၌ထာဝစဉ် ရှင်ပြန် နေမည်ဖြစ်သည်။
တံငါသည်တို့သည် ငါးများကိုပိုက်ဖြင့် အရှင်ဖမ်းမိကြသော်လည်း သူတို့လက်ထဲရောက်သွားသောအခါတွင် သေသွားကြပါသည်။ လူကိုမျှားသော တံငါသည်လည်း အပြစ်သားများကို သမ္မာတရားတည်းဟူသော ပိုက်ကွန်ဖြင့်ဖမ်း၍ သူတို့၏ အပြစ်များကိုသေစေပြီး ခရစ်တော်၏ တရားတော်နှင့် အညီ အသက်ရှင်စေရပါမည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ပထမဆုံး သော သေလွန်သောသူကို ရှင်စေသောဖြစ်ရပ်မှန်ကို တမန် တော် ၉း၃၆-၄၂တွင် တွေ့ရပါသည်။ ယုပ္ပေမြို့ရှိကောင်းသော အကျင့် စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံသော ဒေါ်ကာအမည် ရှိ မုဆိုးမတစ်ဦးသည် နာ၍ သေဆုံးခဲ့သည်။ ထိုအခါ ပေတရု သည်ကြား၍ သေသူရှိရာနေရာသို့ ချက်ခြင်းရောက်လာပြီး နူးညွတ်စွာ ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းသောအခါ သူမ သည် သေရာမှ ပြန်ရှင်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် မိန့်မှာခဲ့သော တရားတော်များကို အမှန်တကယ် လိုက်လျှောက်သောသူ သည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။ ၁သက်-၄း၁၄ ]ယေရှုသည် သေပြီးမှ တဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကို ငါတို့ သည် ယုံလျှင် ထိုနည်းတူယေရှု၌ အိပ်ပျော်သော သူတို့ကို လည်း၊ ထိုသခင်နှင့်အတူ ဘုရားသခင် ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့် မည်။
၃ရာ ၁ရး၁၇-၂၂ = မုဆိုးမ၏သားကို ဧလိယက အသက်ပြန်ရှင်ခြင်း
၄ရာ ၄း၃၂-၃၅ = ရှုနင်မြို့သူ၏ သားကိုဧလိရှဲက အသက်ပြန်ရှင်စေခြင်း
၄ရာ ၁၃း၂၀-၂၁ = မောဘတပ်သားတစ်ဦးသေ၍ သင်္ဂြိုလ်ရာ၊ ဧလိရှဲအရိုးဖြင့် ထိမိသောအခါ ထိုသူသည် အသက်ပြန် ရှင်ခဲ့၏။
မဿဲ ၉း၂၃-၂၅ = ခရစ်တော်က အရာရှိတစ်ဦး၏ သမီးအား အသက်ပြန်ရှင်စေသည်။
လုကာ ရး၁၁-၁၅ = နာဣနမြို့ရှိ မုဆိုးမ၏သားကို ခရစ်တော်က အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
ယော ၁၁း၄၃-၄၄ = မာရိ၊မာသတို့၏ မောင်သေခြင်းကို၊ အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
တမန် ၉း၃၆-၄၀ = မုဆိုးမ ဒေါ်ကာကို ပေတရုက အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့သည်။
ဗျာ ၁၁း၈-၁၀ = မတရားအသတ်ခံရသူတို့၏ ရုပ်အလောင်းများထဲသို့ ဘုရားထံတော်မှ အသက်ပြန်ပေး၍ ရှင်ကြသည်။
ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် ကိုယ်ထင်ရှားစွာ ပြခြင်း
မာကု ၁၆း၉ = မာဂဒလမာရိထံထင်ရှားခြင်း
မဿဲ ၂၈း၉ = အမျိုးသမီးများရှိသို့ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၁၃-၁၅ = တပည့်တော်နှစ်ဦးထံသို့ ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၃၄ = ပေတရုထံသို့ထင်ရှားခြင်း
ယော ၂၀း၁၉၊ ၂၄ = တပည့်တော်(၁၀) ဦးရှိရာသို့ ထင် ရှားခြင်း
မဿဲ ၂၈း၁၆-၁၇ = ဂါလိလဲရှိတပည့်တော်များထံ ထင်ရှားခြင်း
လုကာ ၂၄း၅၁ = တပည့်တော်များအားလုံးရှေ့တွင် ထင်ရှားခြင်း
ခရစ်တော် အမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ခြင်း၏ သက်သေ
ယော ၂၀း၁-၉ = သင်္ချိုင်းတော်တွင် ခရစ်တော်၏ ရုပ်အလောင်း မရှိပါ။
မဿဲ ၂၈း၅-၇ = ကောင်းကင်တမန်က သင်တို့ရှာသော ယေရှုသည် ဤနေရာ၌မရှိ၊ ထမြောက် တော်မူပြီ။
မဿဲ ၂၈း၁၁-၁၅ = ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် အကြီးအကဲများက အလောင်းကို ခိုးသွားကြသည်ဟု ငွေပေး၍ ပြောခိုင်းခြင်း။
ယော ၂၀း၂၇-၂၈ = သောမက ခရစ်တော်၏နံဖေးကို လက်ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် သခင်သည် ထမြောက်ကြောင်း ယုံ၏။
အသက်ထွက်ခြင်းနှင့်ဝင်ခြင်းကို စီရင်နိုင်သော ခရစ်တော်
အသက်ထွက်ခြင်းနှင့် အသက်ပြန်ရှင်ခြင်းကို စီရင် နိုင်သော အစွမ်း Resurrected Power သည် ခရစ်တော်၌ ရှိသည်။
ယော ၁၀း၁၈ – ခရစ်တော်က ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါ စွန့်၏။ ကိုယ့်အသက်ကို စွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကိုယူပြန်ရသော အခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။
ခရစ်တော်၏ ကိုယ်ခန္ဓာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဝိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းပါက သင်၌ မည်သို့သော အကျိုးထူးများ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။ ပျက်စီးသွားသော သင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ပြန်လည်ကောင်းမွန် ရှင်သန်စေပါမည်။
ရောမ ၈း၁၀ – သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသော ဘုရားသည် သင်တို့ထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သော မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သေတတ်သော သင်တို့၏ ကိုယ်ကာယကိုပင် ရှင်စေ တော်မူမည်။
ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ရောမသြဝါဒစာထဲ၌ရှိသော ကျမ်းစာပုဒ...
ကယ်တင်ခြင်းရရှိလျှင် ထာဝရအတွက် လုံလောက်
အို… အံ့ဘွယ် ကျေးဇူးတော် (ဆောင်းပါး)